GADA NEWS SERVICE – http://gaaddisaoromiyaa.blogspot.com
Post author By GADA NEWS SERVICE
No Comments on ODUU AMMEE
Humni Sudaan ollaawwan Itoophiyaa daangaatti kalaa’an meeshaa waraanaa gurguddaan haleele
Humni Sudaan ollaawwan Itoophiyaa daangaatti dhiyoo jiran meeshaa gurguddaan haleeluu aanga’oonni Itoophiyaa naannichaa BBCtti himan.
Gamtaan Afriikaa Itoophiyaa fi Sudaan muddama jidduu isaaniitti hammaataa jiru kana akka laaffisan gaafateera.
Dura taa’aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faki Mahamaat “walitti bu’iinsarraa akka of qusachuun, tasgabbii fi mariin” biyyoota lamaan giddu akka jiraatuuf waamicha dhiyeessan.
“Biyyoonni obbolaa lamaan waldhabbii isaanii karaa nagaatiin furachuu qabu,’’ jedhan Musaa Fakii Mahaamaat.
Walitti bu’insa torbee darbe keessa humnoota sudaan fi milishoota Itoophiyaa naannicha turan jidduutti uumamee tureen, Sudaan loltoonni booji’aman torba jalaa ajjeefamuu komachuun Itoophiyaatti gadoo qabachuu ibsitee turte.
Kana hordofee humni ittisaa Sudaan gandoota Itoophiyaa daangaatti kaluu jiran meeshaalee waraanaa gurguddaa akka moortaarii, madfii fi kaaniin guyyootaaf haleelaa turuu Godina Lixa Gondaritti bulchaan Lixa Armaacihoo Obbo Dassaalenyi Ayyaanaa BBCtti himan.
Haleellaa amma dura raawwatameen miidhaan namarra gahe akka hin jirre kan himan Obbo Dassaalenyi Ayyaanaa, haata’u malee oyiruu fi kaampiiwwan qonnaa irra miidhaan gahuu himaniiru.
Jiraattonni BBCn dubbise haleellaan Wiixata darbe raawwatae ulfaataa ta’uu fi Kibxata hanga waareetti haleellaan sun itti fufu himan.
Guyyoota sadan darban haleellaa meeshaalee gurguddaa gama Sudaan irraa dhufuun dhohiinsaa fi dhukaasa dhagahaa akka turan himu jiraattonni.
Walitti bu’iinsa Roobii darbe Waxabajjii 22 uumameen loltoonni torbaa fi namni nagaa tokko Itoophiyaan jalaa ajjeefamuu kan himte Sudaan, haaloo akka baatu dhaadachuu hordofeeti muddamni kan jabaate.
NAMA ABBAA KOO AJJEESE HAMMADHEEN BOO’E.
No Comments on NAMA ABBAA KOO AJJEESE HAMMADHEEN BOO’E.
Isheenis Kaandis Taawar jedhamti. Lammii Afrikaa Kibbaati. Umurii waggaa 9tti yakka raawwatte. Yeroo haati deemtuu suuta jettee kutaa ciisichaa haadha ishee seente. Achitti kaazinaa tokkotu jira. Kitaabni tokko kaazinaa keessa jira. Isheenis isa bira gahuu hin dandeenye. Isheen intala xiqqoo turte. Teessoo irra baatee banatte . Achiis kitaabicha waggootaaf dhokatee ture sana gubbaa kaazinaa irraa gadi dhiiste. Achiis daftee dubbisuu jalqabde.
Guyyaa sana jireenyi ishee manca’e. Waan argiteen jeeqamte. Isheen fayyaa dhabdee jirti. Osoo guyyaa sana kitaaba sana hin mul’isne ta’ee hoo? Kitaabicha keessatti nama abbaa ishee ajjeesee fi reeffa abbaa ishee argite. Kaandis Taawar guyyaa sanaa kaasee guddachuun amma nama guddaa taaterti. Garuu ammallee gaddatti jirti. Osoo guyyaa sana kitaaba sana hin mul’isne ta’ee!
Kaandiis Tawaar yeroo umuriin ishee ji’a 8 qofa turtetti abbaa ishee dhabde. Kanaaf abbaa ishee hin beektu. Garuu namoonni waa’ee abbaa ishee yeroo dubbatan ni dhageessi. Abbaan ishii nama shubbisuu fi taphachuu jaallatu, yeroo muuziqaa dhaga’u gara waltajjiitti utaalu ture. Kolfee tattaphata. Kanaafidha miseensa Kongiresii Paan Afrikaa kan ta’e. Dhaabni siyaasaa PAC jedhamuun gabaabfame kun Maandeellaa, Sisulu, fi Oliivar Taamboo irraa adda bahe.
Paartiin kun gurraachotaaf dhaabbatus, mormiin Maandeellaa walqixxummaaf mijataa miti. “Afrikaan Kibbaa biyya gurraachaati.” Hallas jedhama. Warri adiin biyya keenya gadhiisanii haa ba’an, kun gahaadha. ” Abbaan Kaandis, fedhii Maandeellaan gurraachota cunqursaa Appaartaayidii jalaa bilisa baasuuf qaban irraa faallaa waliin haa ta’an malee, yeroo tokko tokko harkaa fi guwaantii ta’anii wajjin qabsaa’aniiru.
Guyyaa tokko garuu harka gooftaa Appaartaayidii Yu Jin Decock, jedhamuun beekkamutti kufe. Yu Jin Decock eenyu? Yu Jin Decock ammallee Afrikaa Kibbaatti tarree lubbu balleessitootaa kana keessa jira. Inni hamaa qofa osoo hin taane jinnii ture. Gara jabummaa isaa jechi hin mirkaneessu. Biyya Appaartaayidii keessatti akka Yu Jin Decock hamaan hin jiru jedhu. Decock hogganaa garee dararaa qaama saalaa namaa irratti dhagaa fannisee garagalche tumu ture. Abbaan Kaandis Taawar harka nama, nama nyaatu kanaatti kufee ture.
Kaandiis ijoollummaa isheetii kaastee abbaanshee ajjeefame jettee shakkite. Garuu abbaan ishee nama kanatu ajjeese jettee yaaddee hin beektu. Haati ishee gurraachaafi adiin wal makaa taate akkas itti himtee hin beektu. Afrikaa Kibbaatti ‘kalard’ jedhama. Haati ishee Kalard jedhamti. Garuu ijoollummaatti waan tokko yaadatti. Yeroo firri tokko mana dhufu hunda kitaabni meeshaa sana duuba dhokatee jiru ni baha. Sana booda namoonni kitaabicha bananii boo’u.
Yeroo kun irra deddeebi’ee ta’u ajaa’ibsiifatte. Namoonni kitaaba kana bananii maaliif boo’u? Kitaaba osoo hin banin maaliif hin boo’u? Kunis gaaffii yaaddoo guddaa isheef uume deebisuuf ture. Kitaabni kun suuraa fedhii namoota jal’ootaa fi namoota ajjeesan of keessaa qaba ture. Kitaabni Mata dureen isaas “Gara Onnee Dukkanaatti – Waadaa Ajjeechaa Appaartaayidii”(Into the Heart of Darkness – Confessions of Apartheid’s Assassins) jedhu qaba.
Dhimma kana irratti abbaa ishee ajjeesaa fi reeffaa argite qofa miti. Ajjeechaa qofa illee miti. Abbaan ishee mataa isaa irratti rasaasaan rukutamee, reeffi isaas gubatee suuraa irratti mul’ata. Suuraan kun waggootaaf ture. Umurii waggaa 9 irraa eegalee. Yeroo tokkotti waa’ee of ajjeesuu yaaduu jalqabde. Gaaf tokko onneen ishee dha’uu dhaabe. Dhukkuba onneetiin qabamtee mana yaalaa deemte. Halkan tokko waggaa 16 guuttee of wallaalte. Doktarri hospitaalichaas waan ajaa’ibaa ta’ee itti mul’ate.
Umurii isheetti namoonni carraan dhukkuba onneetiin qabamuu isaanii xiqqaadha. Isheen yaaddoo keessa galtee taʼuu hin oolu. ”Waggoota 20n darban keessatti wanti akkanaa na mudatee hin beeku,” jedhan. Yaaddoo mataa keetiin jireenya kee balleessuuf jirta.” Yeroo kanatti ture kan waggoota darban keessatti abbaa ishee mudate sirreeffamuu akka qabu murteessite.
Nama ajjeese hammachuu fi boo’uu
Maandeellaan bara 1995 yeroo aangootti dhufan Komishiniin Araaraa dhaabbate. Kaayyoon komishinichaa odeeffannoo miidhamtoota Appaartaayidii walitti qabuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf ture. Nama abbaa ishee ajjeese Decoc jedhamu barbaaduu jalqabde. Waa’ee isaa waan baay’ee dubbisteetti. Ajjeechaa abbaa ishee irratti raawwatee ni himatte, sagalee ol kaastee dubbitte. Achiis miirri haaraan itti dhagaʼame. Isheen lubbuun jiraachuu kan dandeessu yoo bineensa adamsituu kana ajjeeste qofa ykn filannoon biraa garaadhaa dhiifama isaaf gochuudha.
“Kana booda dhiifaman isaaf godha.” Haaloo baʼuu illee nan dandaʼa. Yeroon abbaa koo yaadu hunda nama nama nyaatu kana nan yaada. Yeroon isa yaadu hunda miira koo toʼata. Yeroo kanatti nan dhukkubsadha. Ani to’annaa Isaa jalan jira. Abbaa koo ajjeese. Amma suuta jedhee gaddi isaa na ajjeesuuf jira.” “Kanaafidha dhiifama isaaf gochuu malee filannoo biraa kanan hin qabneef.”
Kaandiis namichaaf dhiifama gootee bilisummaa guddaa kenniteef. Miira addaa ture. Miirri dhiifamaa dhugaa waan tureef bilisa na baase. Namicha sana argachuu koo dura, of toʼachuu dandaʼeera, . Kolfaa waan ta’e fudhachuu eegale. Ergasii fayyaan kootti deebi’eera ”Bara 2014tti haati Kaandiis xalayaa argatte. Xalayaan kun abbaa alangaa irraa ture. Maatiin kun waa’ee ajjeechaa abbaa warraa ishee nama ajjeese waliin haasa’uu yoo barbaadan qaamaan wal arguu akka danda’an itti himame.
Kana jechuun, Yu Jin Decock qaamaan fuuldura dhaabbachuun abaarsa dha. Kaandiis yeroo sanatti umuriin ishee waggaa 23 ture. Haati qabiyyee xalayaa sanaa itti himte. Deebiin isheen kennite battalumatti kenname. “Yeroo sanatti jireenya koo jireenya koo keessatti akka hidhamaa ta’ee jiraachuuf akkan jiru beeka ture,” jetti.
Nama abbaa ishee ajjeese dubbisuuf beellamni qabame. Sa’aatin beellamaa yeroo gahu uffattee kaate. Haadha ishee waliinis ni deeman. Nama ajjeesaa Decock jedhamu argachuuf kutaa sana yeroon seenu baay’ee natti ulfaate jetti.
Guutummaa Afrikaa Kibbaatti nama nama nyaatu waan ta’eef guddaa sodaatu. Inni akkuma nama kamii qofaa isaa taa’era. Yeroo sana ga’eessota ganna 65ti. Hamaa waan ta’eef sodaataniiru. Garuu namni idilee tokko qofa taa’a. Nama suuraa qofaan waggoota 20 darbaniif beekani. Namichi abjuu ishee keessattis ta’e dhugaa jiru keessatti ishee dhiphise. Innis akkuma nama fayyaa qabu kamiiyyuu taa’ee jira.
“Lubni araara geggeessaa ture nama abbaa koo ajjeese haadha koo barsiise, anaanis waliin wal na barsiise.” Achiis, Bitootessa 26, 1992, haatishee akkamitti abbaa manaashee akka ajjeese sirriitti akka itti himu gaafatte.
”Inni dubbatamee hin dhumu,maal siif hojjeta ?” ittiin jedhe.
Yeroo inni dubbatee xumuru ”garuu gaaffii tokko si gaafadhuu?”jedheen
”Waan ati barbaaddu na gaafadhu”jedhe.
”Garuu ofii keetiif dhiifama ni goota?”jedheen!
Decock ni rifate.
“Namoota hanga ammaatti maatii isaanii ajjeese barbaaduuf yeroon dhufu gaaffii gaafatamuu sodaadhe keessaa tokko gaaffii kana ture.” Dhumarratti na gaafatte.” Sana booda boo’uu jalqabe. “Garuu osoo ati bakka koo taatee ofii keetii dhiifama ni goota?” Anis lubicha dhiifama gaafadheen, teessoo koo irraa ka’ee nama abbaa koo ajjeese hammadhe. Wal hammannee boonye. Hanga nuuf bahutti.
Gaaffii fi Deebii BBC Jaal Marroo Waliin Taasise.
No Comments on Gaaffii fi Deebii BBC Jaal Marroo Waliin Taasise.
Kaayyoo qabsoo isaa, dhimma araraafi halleellaa tibbanaa irratti ‘ABO-WBOn’ maal jedha?
Jaal Marroo Dirribaa miseensota loltoota ABO-WBO waliinn turtii BBC taasise.
Hidhattoonni WBO dhuguma sadarkaa yaaddoo hin taaneerra jiruu?
Gareen hidhattoota Waraanni Bilisummaa Oromoo ofiin jedhan, kan paarlaamaa mootummaatiin shororkeessaa jedhamuun farrajame kun ammaan tana kutaalee Oromiyaa kan akka lixaa, kibbaa fi gidduugaleessa keessa socho’aa jiraachutu maddeen mootummaa dabalatee himamaa jira. Mootummaanis hidhatoota kanneen balleessuuf yeroo garaa garaatti oppireeshinii akka gaggeessuu ibsaa ture.
Ji’oota lama dura duula waraanaa haaraa mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota federaalaa waliin ta’uun gaggeessuu eegalee hordofee haala jiru irratti miidiyaa biyaalessaaf ibsa kennanii kan turan hoogganaa itti aanaan biiroo bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu WBO ‘sadarkaa nageenya biyyaaf yaaddoo hin taanerra gaheera’ ture.
Manni Maree waloo nageenyaafi tasgabbii biyyaalessaas torban lama dura haala nageenya biyyattii gamaagamee ibsa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti hidhattootni WBO kumootaan ajjeefamanii, kumootni madaahuufi lafti to’atanii ture bilisa bahuu ibsee ture.
Haleellaawwan magaalota Gaambellaa, Dambidoolloofi Gimbiis kan raawwate gabaasotni mootummaan kunniin dhagaahamuu booda.
Haleellaan aanaa Gimbii Toleetti raawwatamuu dura kan dubbisne deetaan Ministiraa Tajaajila Kominikeeshinii Federaalaa, Obbo Kabbadaa Deessisaa, ‘‘odeeffannoo hanga ammaatti qabu dhukaasa banamuu dhageenyeerra. Qaamni mootummaa achi jiru garicharratti tarkaanfii fudhatee akka turedha kaniin beeku” jechuun hidhattootni haleellaa banuu mirkaneessaniiru.
“Gimbii keessatti osoo hintaane naannoo gandoota ollaa keessatti dhukaasni banameera. Waanuma walfakkaatu naannoo Dambi Dolloo fi Gaambellaattis dhukaasa banuun tureera. Garuu tarkaanfiin irratti fudhatamee magaaloonnis gara nagaatti deebii’aniiru,” jedhan aanga’aan kun.
Gaaffii ofii humnoonni ‘dadhabsiifamaniiru’ jedhaman kunneen eessaa dhufanii magaalota kanneen seenuu danda’an jedhuuf Obbo Kabbadaan akkasiin deebii kenna.
”Ani odeeffannoo mootummaan hidhattoota dhabamsiisera jedhu hin qabu. Garuu tarkaanfii fudhachaa jirra. Nageenya biyyaaf yaaddoo ta’aniiru. Kanumaaf bifa haaraatiin tarkaanfii fudhachaa kan jirrus,” jedhan.
Gabaasa mootummaan dhiyeessu kana ilaalchisee BBC’tti dubbatanii kan turan dubbii himaan idila addunyaa WBO Odaa Tarbii ”gabaasa kijibaati” jedhanii, Onni gadhiisaniis tooftaa waraanaaf akka ta’e himanii ture.Gammoojjiifi baadiyaa qofa osoo hin taane magaalota keessa galaa jirra. Marii biyyaalessaafi ajjeechaa namoota nagaa ittiin himatamanirrratti Marroo Dirribaa maal jedha? Ofii ‘ABO-WBO’ sadarkaa ummataaf yaaddoo hin taane irra qaqabeera wayita jedhemeetti guyyaa tokkichatti magaalota akka Dambi Doolloo, Gimbii fi Gambeellaa galuun maal akeeka? Kaayyoon isaa hoo maali?
Gaaffiiwwan jedhan BBCn ajajaa ABO-WBO, Marroo Dirribaatiif dhiyeesseera.
”Mootummaan kumaataman ajjeesnee, kumaatama boojineerra, kana booda rakkoo hin ta’an. Bakka qabatanis hin qaban jechuu quba qabna,” jechuun WBOn akkasitti akka hin tilmaamne dubbata Marroo Dirribaa. “Ammattis gammoojjiifi baadiyaa keessa qofa osoo hin taane magaalota eegumsa qaban keessa galaa jirra. Namoota siyaasaa qawwee hidhachiisuun bobbasanis eegumsa isaanii bira cehaa jirra,” jechuun hima.Sababii tibban magaalota seenuun barbaachiseef yoo dubbatus, dubbii ”dharaa mootummaan balleessineerra, qawwee caccabaa poolisii harkaa hataniin lolaa turan jechaa tureef deebii akka ta’uudha,” jedha Marroon.
Waraana magaalaa Gambellaa keessatti gaggeefameen walqabatee namootni 40 ta’an ajjeefamuu ragaalee magaalichaa bahan ibsaniiru. Marroon garuu lolli madaa’uus wareegamuus qabaachun beekamaa ta’uu kaasuun, kan gama isaanitii miidhame hanga sana akka hintaanee haala. “Nuti magaalicha to’annee yeroo ofii barbaannetti waan barbaadnu raawwannee baane.
Maal raawwattanii baatan kan jedhu ibsuun hin barbaachisu,” jedhe. Akkasumas, guyyuma walfakkaatu magaalaa Dambi Doolloo fi Gimbii galanii akka turan kan himu Marroon, keessattuu magaalaa Dambi Doollootti buufata waraanaa mootummaa bakka saddii ol jiru keessaa humna nageenyaa baasuu hime.
Haata’u malee, jiraattonni BBC’n dubbise hidhattoonni guyyaa sana gara ganamaa magaalaa Dambi Dolloo erga seenanii booda, hospitaala keessaa qoricha fe’atanii bahuu BBC’tti himanii turan. Marroon garuu, ‘‘Dambi Doolloo keessa qabeenyi nama dhuunfaa tuqne tokkoolleen hin jirru. Hospitaala gallees madoo keenya yaallee baane malee qoricha feenee deemne hin qabnu,’’ jedha komii irratti ka’eef deebii wayita kenneetti. Qondaalli mootummaa BBCn dubbise Obbo Kabbadaanis hidhattoonni kunneen guyyaa sanatti magaalicha galuufi dhukaasni naannicha akka ture kaasan.
Dabalataanis haleellaa humnootiin mootummaa raawwataniin tarkaanfii irratti fudhate jedhan. Aanga’aan mootummaa olaanaa kun, gareen hidhate kun saamichaa, ajjeechaa, akkasumas ummanni akka hin qotanne gochaa jira waan ta’eef mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira jedhu. Raayyaa ittisa biyyaa iddoo hundatti ramaduu hin danda’amneef, ummanni gama kanaan gahee mataasaa bahuu akka qabus dubbatan Obbo Kabbadaan. Tibba waraanni Kaaba Itoophiyaa hammaatee tureetti hidhattoonni WBO aanoolee Wallaga Lixaa kan akka Begiifi Gidaamii qabatanii akka ture ibsan.
Haata’u malee, magaala seenanii bahuun nageenya uummataaf rakkoo hin ta’uu gaaffii jedhuuf, bakkeen qabatanii booda gadhiisanii bahan akka jiru kaasuun, ”amma uummatadha qabanne. Yeroon itti lafaafi uummata qabannu jira,” jedhe. ”Kan jirru waraana keessa malee bakka sirbaa ykn mana amantaa miti. Halkan tokkotti biyya qabachuun hin jiru. Tarkaanfiin keenyas adeemsuma kana keessa darba. Waraana keessatti wareegamaafi buqqaatiis qabaachuun beekamaadha,’’ jechuun rakkoo ummatarra gahuu danda’u kaasa.
Waraana hidhattoonni kunneeniifi mootummaan gaggeessaa jiraniin walqabatee jiraattonni yeroo gara garaatti BBC dubbise ‘rasaasa lama gidduutti’ rakkoo hamaa argaa jiraachuu himatu. Mootummaanis irra deddeebiidhaan ajjeechaa namootaafi mancaatii qabeenaatiif hidhattoota kanneen yoo himatu, isaan garuu kana waakkachuun qorannoon qaama walaba ta’een akka taasifamu gaafatu.
Hidhatoonni ABO- WBO maal barbaaduu?
Addi Bilisummaa Oromoo jalqaba bara 1976 yeroo hundaa’e sirna mootummaa Itoophiyaa yeroo sana tureerratti qabsaa’uun sirna dimokiratawaa ijaaruuf ture kaayyoonsaa. Kana keessattis ummanni Oromoo mirga hireesaa ofii ofiin murteeffachuu akka goonfatu, Itoophiyaa keessatti saboota kaan waliin mirga wal qixa tahe akka argatu gochuu, yoo kun hin taane ammoo Oromiyaa walabaa ijaaruu akka ta’e qondaalonni dhaabichaa himaa turan. Waraanni Bilisummaa Oromoos damee waraanaa ABO ta’uun waggoota 50 olitiif qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture.
Booda MM Abiy Ahimed gara aangootti dhufuu hordofee ABO’n akkuma paartilee biyya baqaa turan kaaniitti waamicha godhameefiin hoggansaafi waraanasaa Eertiraa irraa gara biyyaatti deebiisuun karaa nagaatiin qabso gaggeessuu eegale. Waraanni biyya keessatti hafes gara qabsoo nagaatti makamuuf waamichi taasifamee kaan galuun, kaan ammoo ‘shakkii mootummaa irraa qaban’ ibsuun hafan.
Kana hordofees Paartiin ABO qabsoo karaa nagaa akka gaggeessu ibsuun waraana bosonatti hafe akka hin hogganeefi adda bahe ifa taasise. Isaan boodha gareen hidhattootaa bosonatti hafan Marroo Dirribaa ajajaa ol aanaa gochuun qabsoo hidhannoo itti fufuu kan ibse.
Kaayyoon hidhattoota WBO amma lollaa jiruu maali? Karaa nagaatiin waan qabsaa’aniif galmaan gahuun hin danda’amuu gaaffiiwwan Marroof dhiyeessinedha.
Kaayyoon WBOn amma qabsaa’uuf kan ABOn duraan waggoota shantamaaf qabatee deemaa ture irraa adda miti jedha. ”Hogganni ABO waraana kana dhiisnaan siyaasa isaas warana isaas iddoo tokkotti walitti fiduun itti fufsiifne. Kaayyoon isaa kanuma ABO kaleessati,” jedha. ”Innis uummata Oromoo bilisa bahe, kan dhiibbaan siyaasaas ta’e dhiibbaan waraanaa irra hin jirre ijaaruudha. Uummata Oromoo bilisa ta’ee Oromiyaa bilisaafi walaba taate ijaaruu danda’uufi hireesaa ofiin murteeffatu dhugoomsuudha.”
Akkasumas, ”uummata bilisaa taanee sabaafi sab-lammoota Itoophiyaa kaan waliin wal qixa taanee, namummaafi aadaansaa kabajamee, waan siyaasaafi seenaan nuuf malu argannee jiraanna jedhu fiduudha,” jedha. ”Ummanni Oromiyaa walaba taateen ijaarrachuu barbaada kan jedhu yoo tahe, sana kabachiisuufi tiksuuf qabsoofna. Itoophiyaa keessatti dhiitamuufi cunqurfamuun hafee saboota kaan waliin karaa wal qixa taheen jiraachuu yoo barbaades isas kabachiisuuf qabsoofna,’’ jechuun kaayyoo qabsaa’aniif hima Marroon. Humna waraanaa gahaa tahe qabaachuu kan dubbatu Marroon, lakkoofsaan garuu hanga kana jedhee himuu hin danda’u jedhe.
Waraanaarra karaa nagaatiin deebii barbaaduu hin wayyu?
TPLF mootummaa waliin mari’achuuf qophii tahuu ibsaa jira. Obbo Jawaar Mahaammad dabalatee namoonni siyaasaa, akkasumas qaamonni gara gara miidhaa waraanni qaqqabsiisu eeruudhaan furmaanni kara anagaatiin akka barbaadamu gaafachaa jiru. Mootummaanis hidhattoota ABO-WBO adda baasee dubbachuu baatus, rakkoowwan jiran karaa nagaatiin furfuuf akka fedhu ni dubbata. Ejjennoon gareen hidhattoota kun dhimma kanarratti qabu maal jechuun Marroo (Kumsa Dirribaa) gaafanneerra.
Qabsoo biyya keessaafi alaan sirna mootummaa Itoophiyaa waggoota kurnan lamaa oliif ol aantummaa TPLFn to’atame irratti godhameen Oromoo kumaatamni aarsaa itti tahee MM Abiy Ahimed bara 2018 gara aangootti dhufaniiru. Haata’u malee, dargaggoonni hedduun ammayyuu gaaffiin keenya hin deebine jechuun amanu. Hidhaafi ajjeechaan biyyattii keessatti gaggeeffamus daran dabalaa adeemuun yaaddoo biraa uumeera.
Ammayyuu uummanni Oromoo bilisummaa barbaadu hin goonfanne kan jedhu Marroo Dirribaa, ‘‘Kan durii caalaa kan hammatedha. ABO yeroo kamuu caalaa amanta irratti gatee kan gale bulchiinsa MM Abiy Ahimedittidha. Garuu akka ka’uu hin dandeenyetti kan miidhame bulchiinsa isaanii jalattidha jennee amanna,‘‘ jedhe.
”Namatti garuu nagaa fakkaata. Eeyyee Oromoo irraa kan dhufe fakkaata, garuu kan baay’ee hamaa tahedha. Dhaabni kun seenaan qofa akka yaadatamutti akka baduuf nurratti hojjetaniiru,” jechuun komatu. Bara 2018 mootummaafi ABO’n waliigaluun hoggani isaa Ertiraa irraa gara biyyaatti gale. Simannaa guddaanis taasifameef. WBO keessaas jaarsummaafi Abbootii Gadaa waamicha taasisaniin kan galan jiru. Kaan ammoo akka itti hin amanne ibsuun hafan.
Marroon ABO mootummaa waggaa 40 oliif wal waraanaa ture deebisee amanuun warana isaa qawwee hiikkachiisee gammoojjii Eertiraa keessaa gara biyyatti galche. Garuu nu bittinsan jedha. “Namni dhiiga namaa dhangalaasuu barbaadus tahe dhiigasaa dhangaalaasuu barbaadus hin jiru,” jechuun waraanni karaa nagaarra filatamaa akka hin taane ibsa. Garuu, daandii nagaa jedhu kana irratti waan arganne deebisnee dhabneerra. Hoggansi isaa hedduun hidhaa galan. Kaan ammoo shiraan akka walirratti ka’an godhan. Karaa nagaa jennee aarsa kaffalletu caale jennaan karaa kana filanne,’’ jedha.
Marii nagaatti dhufuuf qophii qabduu?
MM Abiy Ahimed tibbana paarlamaa irratti qaama warana keessa jiru kamuu waliin nagaa buusuu barbaanna jedhan. TPLF waliin mariin nagaa buusuu Tanzaaniyaa Arushaatti jalqabeera hamiin jedhus ture. Haatahu malee, MM Abiy Ahimed gareen qorannoo gaggeessuufi dhimma kana hordofu akka jiru himuun uummata irraa mariin dhokatee gaggeeffamu hin jiru jedhan.
Garuu bu’aa isaatu caala waan taheef qaama kamuu waliin nagaa buusuu barbaannas jedhan. TPLF gama isaan mootummaa waliin Keeniyaatti mariidhaaf qophii ta’uu ibseera. Obbo Kabbadaa Deesisaa ammoo ‘‘Mootummaan akka qajeeltootti qaama kamiyyu waliin waraana hin barbaadu. Ani mootummaan TPLF waliigaltee jalqabeera kan jedhu reefuu sirraa dhagahuu kooti. Akka mootummaatti waliigalteen dhoksaadhaan gaggeeffamu hin jiru. Karaan nagaa yeroo kammittiyyuu banaadha,’’ jedhan.
Marroon dhimma marii kanaa ilaalchisee akka daa’imaatti waan xiqqon soosobamee kan galu hin jiru. Waan barbaannu jira. Isa ammoo gadi buusnee waan harka kennanuuf hin jiru. Mootummaan ABO-WBOn nagaa biyya kanaa keessatti waan gumaachutu jira. Waliin hojjenna jedhee kan amanamu yoo tahe nuyis qophiidha jedhe. ‘‘Bakka nuyi filannetti, nama feenu mootummaafis nuufis taha jennaa kan amannu bakka jirutti, taajjabdootni idil-adunyaa bakka jiranitti kan waamichi nuuf godhamu taaanaan mariif qophiidha.
‘‘Kanaan ala akka daa’imaatti karameellaan nama gowwomsanii kan nama waaman yoo tahe kan gowwomfamu hin jiru. ’’De’etaan Ministira Komunikeeshinii Obbo Kabbadaa Deesisaa gamasaanitiin, ABO-WBOn ammas akka gara qabsoo nagaatti deebi’an barbaanna jedhan.
Obbo Kabbadaan ajjeechaa suukaneessaa raawwachuun hidhattoota kana himatanii, ‘‘Oromoon sirna kam keessattiyyuu badii fi cunqursaan akkanaa [hidhattootaan] Oromoorra gahee hin beeku,‘‘ jechuun ibsu. ‘‘Akka mootummaatti gaaffiin Oromoo deebi’ee dhumateera amantaa jedhu hin qabnu,” jechuun gaaffii isaanii karaa nagaatiin dhiheessuu akka danda’an kaasu.
‘‘Badii guddaatu ummatarra gahaa jira. Ummanni gara lixaa jiru gara caalu qotachaa hin jiru, buna isaa guurrachaa hin jiru, karaa deemaa hin jiru. ‘‘Gubuudha, saamuudha, horii irraa qaluudha. Kanaafu, mootummaan nageenya buusuudhaaf fedhii guddaa qaba. Qaama akkasiin ummatarratti roorrisu dhaabbatee ilaaluu waan hin danda’amneef malee motummaa waraanatti seenuu filateeti mitis,” jedhan. Hidhattoonni kunneen garuu himannaa irratti dhiyaatu yeroo hedduu ni waakkatu.
Hariiroo TPLF fi dhaaba biroo waliin qabu
ABO-WBOn yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa humnoota TPLF fi mootummaa Federaalaa waliin gaggeeffamaa turetti TPLF waliin hariiroo waraanaa tolfachuu ibsee ture. Ammas hariiroon TPLF waliin qaban akkuma duraa sanatti jira jedhe Marroon. Dhaabbileen siyaasaa biroo sagalis akkuma TPLF waliin hariiroo ummachu ibsun saanii ni yaatama. Dhiyeenya ammoo Adda Bilisa Baasaa Gambeellaa waliin oppereshinii waloo Gambeellatti gaggeessuu dubbii himaan ABO karaa fuula tiwitaraatiin ibsee ture. Marroonis humna Gamabeellaa kana waliin hariiroo yeroo dheeraa qabna jedhe.
‘’Osoo hin hundeeffamiin durayyuu ajajaa waraanaa fi siyaasaa addichaa waliin dubbataa turre. Waan guuttachuu qaban waan tureef gama meeshaafi kaaniin wal quba qabna ture. Addichi dhiyoo hundeeffame osoo hin taane dhiyoo achii as bahe,’’ jedha. Waraana humnoota mootummaafi WBO gidduutti godhamuun uummanni bakka adda addaatti miidhamaa jiraachu himata.
Namoonni BBC’n yeroo adda addaatti dubbise, humni nageenyaa mootummaas yeroo dhufu nyaachistan, obaastan jechuun kaan hidhaatti darbaa, kaan irratti tarkaanfii fudhata jechuun komatu. Gama biraan ammoo, namoonni mootummaa deeggaru jedhamanii shakkaman hidhattootaan akka ajjeefamaniifi dararamaa jiraattoonni dubbachu kana dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Itoophiyaan filannoo bara 2021 booda biyyattii keessatti nagaafi tasgabbii dhibe deebisuuf, komishinii hundeeffamuun marii biyyaalessaa gaggeessuuf sochiitti jirti.
No Comments on Waa’ee raadiyoo hangafaa Afaan Oromootiin tamsaasuu eegale kana beektuu?
Buufata Raadiyoo G/G
Itoophiyaatti waggoota saddetamaan dura akka salphaatti raadiyoo ofii qabaatanii dhaggeefachuun haa turuutii daboodhaan bakka tokko dhaabatanii sagalee guddistuudhaan dhaggeeffachuunuu carraa namni hundi hin arganne ture.
Moggaasa maqaa Xaaliyaanii, Sheentereediyoo (centre of radio) ykn giddugala raadiyoo jedhuun raadiyoon bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartee (1936-1941) turte keessa Jimmatti hundeeffame.
Jidduu galli tamsaasa raadiyoo kunis, seenaa tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo keessatti isa dursaati, jechuun ogeessi seenaa godambaa magaalaa Jimmaa, Obbo Najiib Raayyaa BBC’tti himeera.
Sheentereediyoon Aanaa Maannaa Ganda Keellaa Guddattii jedhamu kan magaalaa Jimmaarraa fageenya kiiloomeetira shanirratti argamutti kan hundeeffamee ture yoo ta’u, ijaarsi isaa bara 1936’tti jalqabuun bara 1937 booda ammoo tamsaasa jalqabuuti himama.
Akka ogeessi seenaa godambaa, Obbo Najiib dubbatutti, teeknolojiin Sheentereediyoo naannoo bahumsa magaalaa Jimmaa daandii lixaan gara magaalaa Aggaarootti geessu kan magaalaa Jimmaarraa kiiloomeetira shan fagaatu irraa kan tamsa’u ture.
Achiinis meeshaan sagalee simatan ykn risiivara (receiver) kan dambalii tamsaasichaa fudhachuun mana qopheessaa magaalaa Jimmaa irraa gara sagalee guddistuuwwan (Speakers) bakkeewwan sochiin namootaa itti danatu jahatti tamsa’aa ture.
Magaalichatti bakkeewwan namoonni itti danatan jaha: Aweetuu Mandaraa, Qocii, Faranj-araadaa, Jireen, Mantiinaa, Shawaa-barrii fi Safara Salaam kanneen jedhamanitti jiraattonni ganama sa’aatii 2:00, guyyaa sa’aatii 6:00 fi galgala sa’aatii 12:00’tti dhaabatanii labsii fi odeeffannoo gara garaa hordofaa akka turan Obbo Najiib BBC’tti himeera.
Haata’u malee, ”Bara 1941’tti Xaaliyaaniin biyya gadhiistee, buufata raadiyoo Jimmatti hundeessites dhiiste baate.
Kanuma hordofuun ture mootichi Hayilasillaasee yeroo biyyatti deebi’an, kallaattiidhaan raadiyoon kun akka cufamu kan godhan,” jedhu Obbo Najiib.
Sana booda ammoo Ingliziin guutummaa buufata raadiyoo kana buqqisuun gara Sudaan, Omduramaan geessite jedhu.
”Yeroo ammaa kanas dhaabbata Raadiyoo Omduramaan (Omdurman Radio Station) jedhamuudhaan Sudaanitti tamsaasa raadiyoo biyyaalessaa kennaa jira,” jedhu ogeessi seenaa godambaa Obbo Najiib.
Kan akka hambaa seenaatti as godambaa kanatti argamu risiivara Sheentereediyoo yoo ta’u, mana qopheessaa magaalaa Jimmaa kan Xaaliyaanotaan ijaarame keessa ta’uudhaan dambaliidhaan tamsaasa raadiyoo buufata isaarraa darbu fudhatee gara sagalee guddistoota magaalaa Jimmaatti tamsaasaa turedha.
Turtii waggoota shanii Xaaliyaaaniin Itoophiyaa keessa turteen, misoomni ijaarsa magaalaa, riqichaa, manneen barnootaa, sinimaa fi gamoolee bashannanaa hedduun magaalota Itoophiyaa gara garaa isaan buufatanii turanitti har’allee hambaa ta’ee hafee jira.
Seenaan hambaa biyya keessaa hatamee gara Sudaanitti fudhatame kun akka biyyaatti deebi’uuf adeemsi jalqabbiirra akka jiru dubbatu, ogeessi seenaa godambaa magaalaa Jimmaa BBC’tti dubbatan kun.
Sheentereediyoon afaanota meeqaan tamsaasaa ture?
Sheentereediyoon afaanota gara garaa shaniin tamsaasaa akka ture himu qorattoonni seenaa.
Afaanooti Sheentereediyoon ittiin tamsaasaa tures: Iswaahilii, Afaan Oromoo, Afaan Araabaa, Afaan Ingilizii fi Afaan Xaaliyaaniitiin tamsaasaa ture.
Afaan Oromootiin alatti afaanootii biyya biraa kunneen attamiin akka raadiyoo kanaan itti dhimma bahan ilaalchisees yunivarsiitii Jimmaatti qorataan Aadaa Oromoo fi gargaaraan pirofeesaraa Kamiil Mohaammad BBC’tti waan himan qabu.
Afaan Oromoo fi Arabaa bara bulchiinsa mootii Abbaajifaar 2ffaa magaalaa Jimmaatti akka afaan hojiitti kan dhimma itti bahamee ture jedhu qorataa Kamiil.
Iswaahiliin ammoo afaan gaanfa Afrikaatti bal’inaan dubbatamuu fi afaanonni Xaaliyaanii fi Ingilizii ammoo siyaasa bara sanaatti hariiroo fi hololaa idil-addunyaatiif waan isaan gargaaraniif itti fayyadamaa turan jechuun haalaa ture kan BBCtti himan gargaaraan pirofeesaraa Kamiil Mohaammad.
”Tamsaasni asitti bara 1937’tti eegale kunis tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo kan jalqabaati” jedha Najiib Raayyaa.
Xaaliyaaniin raadiyoonii kan hundeessite hundaa ol holola mootummaa isaanii ittiin dabarsuu fi babal’isuudhaaf itti fayyadamaa turan.
Kanaafuu seenaa keessatti raadiyoo Afaan Oromootiin tamsaasuu eegale kan jalqabaa magaalaa Jimmaa irraa ture jedhu Obbo Najiib.
Haaluma kanaan hanga bara 1941’tti kan itti fufe yoo ta’u akkuma mootiin Hayilasillaasee Ingilizii, biyya itti baqatanii turanii gara Itoophiyaatti deebi’aniin akka tamsaasnii Sheentereediyoo magaalaa Jimmaa irraa tamsa’u dhaabsisani.
Kun ammoo, guddina raadiyoo Afaan Oromoo akkanni ittifufiinsa hin qabanne taasisuun, “Biyya keessatti dhorkamuun tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo diddaa gara garaa uumuudhaan, yaaliiwwan tamsaasa raadiyoo Afaan Oromootiin taasisuutti geesse.
”Bara 1965tti Abbubakar Musaa tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo Somaaliyaa Moqadishoo irraa tamsaasuu eegale. Sana booda ammoo 1972tti raadiyoo Hararii kan jedhamu ammoo Harar irraa Afaan Oromootiin tamsaasaa ture,” jechuun haala ture kan himan gargaaraan pirofeesaraa Kamiil Mohaammad.
”Bu’aa bahii hedduun booda, seenaadhuma Sheentereediyoo hordofuudhaan, bara 2010’tti ammoo raadiyoon hawaasaa yeroo jalqabaatiif Afaan Oromootiin yunivarsiitii Jimmaarraa tamsaasuu eegale” jedha Kamiil Mohaammad.
Baroota weerara Xaaliyaanii keessa kutaalee Kibba Lixa Itoophiyaattis, ijaarsa magaalota Oromiyaa kan akka Jimmaa fi Aggaaroo keessattis bu’uura guddaa kaa’aniiru.
Kunimmoo ijaarsa gamoo fi riqichaan olitti guddina afaanii, fiilmii fi ogbarruu har’aatiif gumaacha mataasaa bahateera, jechuun Kamiil Mohaammad fayidaa tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo jalqabaBBC’tti himeera.
Kanamalees, boodarra Sheentereediyoon, bakka itti Afaworq Gabrayesuus, dubbi-himaan mootummaa Xaaliyaanii bara sanaa fi barreessaan asoosama dheeraa afaan Amaaraa jalqabaa kan ta’e Xoobbiyaa jedhamu itti hidhame ta’uus seenaan ni kaasa.
Bakki kun yeroo ammaa buufata waraanaa humna addaa Oromiyaa ta’uudhaan tajaajilaa jira.
Magaalaan Jimmaa magaalota Itoophiyaa gamoowwan jajjaboo umrii dheeraa qaban kan kaayyoolee bulchiinsaa, daldalaa, bashannanaa fi mana nyaataaf dhugaatiitiif Xaaliyaanotaan ijaaraman hedduun keessatti argaman keessaa ishee tokko akka taates seenaan ni yaadachiisa.
JAAL MARROO (KUMSAA DIRRIBAA)
No Comments on JAAL MARROO (KUMSAA DIRRIBAA)
Waliigalteen waraanaa TPLF fi dhaabbilee hidhannoon qabsootti jiran kaan waliin taasifne erga TPLF duubatti deebi’ees akkuma itti fufetti jira jedhan hogganaan Waraana Bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO -Shanee jedhee waamu Kumsaa Dirribaa [Marroo].
Jaal Marroo Hoogganaa WBO Walii Galaa
Gareewwan paarlaamaan Itoophiyaa tarree shororkeessitootatti galche kunneen ifatti hariiroo tolchuun Finfinneetti qajeelaa turuu isaanii ibsaa turan.
Hidhattoonni kunneenis gama Lixaafi Kibba Oromiyaa sosso’an waggoota sadan darban bakkawwan tokko tokko keessatti mootummaa waliin wal waraanuutti akka jiran maddeen ni mul’isu.
Godinaalee akka Wallaggaafi Shawaa Lixaa keessatti aanga’oota mootummaa dabalatee lammiilee nagaa yeroo garaagaraatti ajjeefamaa turaniiru.
Ajjeechaa kanaaf ammoo mootummaan irra deddeebiin qaama hidhate kana kan himatu yoo ta’u, oppereeshinii gaggeessuun yeroo gababaa keessatti akka dhabamsiisullee waadaa galaa tureera.
Guraandhala bara 2020 BBC waliin gaaffiifi deebii kan taasisan Itti-aanaa Itaamaazhuur Shuumiin yeroosiifi Fiild Maarshaal Raayyaa Ittisaa ammaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa, tarkaanfii fudhatameen ‘hidhattoota muraasatu hafe’ jedhanii turan.
Haata’u malee, ergasii hidhattoonni kunneen argama isaanii gara Jiddugaleessa Oromiyaatti babal’isaa jiraachuutu himama.
Gareen hidhattootaa kunis garee finciltootaa TPLF kan kaaba biyyattiitti motummaa waliin wal waraanuutti jiruu waliin hariiroo waraanaa uummachuu ibsuunsaa ni yaadatama.
Humnootiin TPLF kan kaabaa biyyattiittis ji’oota 16 durarraa kaasee motummaa Itoophiyaa waraana gaggeessaa kan ture yoo ta’u, hanga naannoolee ollaa Amaaraafi Affaaritti babal’atanii turan Mudde keessa naannolee kanneen keessaa baafamunsaanii ni yaadatama.
Yaalii humnootni TPLF magaalaa Finfinnee taasisaa turanis duula mootummaan Itoophiyaa irratti gaggeesseen fashalaa’u motummaa beeksiiseera.
Hogganaan WBO Marroo Dirribaa garuu humnoonni TPLF duubatti waan deebi’aniif humni waraanaa isaanii imala gara Finfinneetti jechuun jalqabe hin dhaabne jedhu gaaffiifi deebii BBC waliin taasisan irratti.
”Qabsoon Waraana Bilisummaa Oromoo warra TPLF irratti hidhatee hin beeku, isaan irratti hidhatees galma hin gahu. Kanaan durayyuu TPLF irratti qabsoo gaggeessaa turre. Isa hangafaatis.
”Carraa qabsoo keessatti argatetti ammoo fayyadamuun itti milkaa’eera. Qabsoon gara Finfinneetti galla jennee eeggalle hin dhaabbanne,” jechuun himan.
Aanolee adda addaas harka mootummaatii baasuun waraanni isaanii qabatee akka ture kan himu Marroon, akka fakkeenyaatti aanolee Wallagga Lixaafi Qeellam wallaggaa hedduu qabatani turuu hima.
Mootummaan Qeellam Wallaggaa keessaa Gidaamiin ji’oota lamaaf harka hidhattootaa turuu himuun amma deebisee akka qabateefi hojiin idilee akka bakkatti deebisee dhiheenya kana himeera.
Haa ta’u malee, godinichatti hojjettonnii mootummaafi nageenyaa lakkoofsaan 40 ol ta’an ammallee achi buuteen isaanii dhabamuu qondaaltonni himan illeen, hidhattoonni dhimma kanarratti waan dubbatan hin qaban.
Hoganaan Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa Obbo Shaafii Huseen ji’a dura gaaffiifi deebii BBC waliin taasisaniin, mariin bilchina qabu karooraan hogganamee gaggeeffamaa jira waan ta’eef humni nageenyaa qindaa’ee ummata of faana hiriirsee tarkaanfii hadhaawaa fudhateera, fudhataas jira jedhan.
Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru qulqullessinee keessaa bahuudhaaf torbanoota sadii hanga afurii qofa nu gaafata kan jedhan qondaalli kun “ergamtuu Wayyaanee kan taate ABO-Shaneen bu’uura hin qabu.
”Uummannis tufee gateera of keessaa. Innumaayyu amma ammoo gooftoliin isaan barbaada’aniiru waan ta’eef mogolee isaan buusee jira,” jedhanii turan.
Itti dabaluunis “ergamtuu wayyaanee mitii wayyaaneeyyu barbadeessinee deebine,” kan jedhan Obbo Shaafiin, Bunnoo Beddellee, Iluu abbaaboor, Jimma, Baaleefi Qeellam Wallaggaatti oppereeshinii milkaa’aa gaggeessuu himun ummanni gara misoomaa akka fuula garagalfatu ni taasifama jechuun himanii turan.
Waliigaltee TPLF waliinii
WBO fi TPLF dabalatee dhaabbileen siyaasaa sagal Ameerikaatti waliigaltee walii mallatteessanii akka ture gabaafamaa ture. WBO fi TPLF waliigaltee waraanaa akka qaban himunsaanii ni yaadatama.
Amma erga TPLF naannolee Affaar fi Amaaraa keessaa baafamee waliigalteen sun maal irra jira kan jedhu ifa miti.
Maqaa Marroo jedhamuun kan beekamu ajajaan hidhattoota WBO, ”Waliigalteen dhaabbileen qabsoo hidhannoo gaggeessan tolfatan akkuma jirutti jira. Waliigalteen waraanaa, odeeffannoo wal jijjiiruu akkuma eegametti jira,” jedhe.
Carraa argannetti fayyadamuun humna waraanaa keenya gara sadarkaa biraatti ceesisu irratti hojjechuun ittiis milkoofneerra jedhe.
Mootummaan Itoophiyaa TPLF deeggarsa maallaqaafi leenjii WBOf kenna jechuun himachaa ture.
WBO fi TPLF waggoota dheeraaf akka diinaatti kan wal ilaalaa turan yoo tahu, qabsoos wal irratti gaggeessaa turan.
Yakka ajjeechaafi ukkaamsuu namoota nagaa irratti
Bakkeewwan hidhattoonni socho’an keessatti yakkoonni ajjeechaa fi nama ukkaamsuun mallaqa gaafachuu yeroo adda addaatti raawwataa akka turan jiraattonniifi qondaaltonni mootummaa irra deddebiin dubbatu.
Dabalataan bakkeewwan kanneen keessatti seer-maleessummaan akka dabaleefi qabeenyi isaanii saamamuunnamoonni nagaanis akka ajjeefaman jiraattoonni BBC’n dubbise yeroo garaagaraatti himaa turan.
Badii irra gahaa jiruuf jiraattonni hidhattoota gama Lixaafi Kibba Oromiyaa sosso’an, hidhattoota Amaaraa akkasumas humnoota nageenyaa mootummaa himatan.
Dhimma kana kan gaafatame Kumsaa Dirribaa (Marroon) godinaalee akka Wallaggaa keessatti uummanni nagaan rakkoo ajjeechaafi saamichaaf saaxilamuun dhugaa tahuu hima. Ta’us, hidhattoonni saanii kana hin raawwatan jechuun waakkata.
”Sabni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromoon gaggeessun baduu irra WBOn qabsoo Bilisummaa Oromoo gaggeesu baduun irra filadha ani,” jedhe.
Naannoo sanatti sochii waraana mootummaa, seer-maleessummaa dabaluufi qawween akka barbaadame argamuu akkasumas daangaa Amaaraa irraan humni Faannoo jedhu galuun uummata irratti saamicha gaggeessuun dhoksaa hin qabu jechuun hima.
”Waraanni keenya naamusa mataa isaa danda’eefi gubbaa hanga gadii to’annoo qaba. Qawween humnoota mo’amaniifi finxaaleyyii naannoo Amaaraa irraa galan irraa argamu harka namoota meeshaa qabachuun hin qabnee galeera. Kun hundi uummata irra miidhaa geesiseera.”
Miseensa keenyaan yakki akkasii raawwate taanaan eeruu uummataan tarkaanfii fudhachuuf qophiidha kan jedhu Marroon, ”wanti diida jirruuf ofii rakkoo qaba yoo tahe qabsoo nuyi gaggeessinuuf hin jirtu.”
Dubbii himaan isaanii garuu torban muraasa dura miseensonni hidhattootaa booda kana nutti makaman jedhan ”rakkoo naamusaa qabaachuu malu” jechuun amananii turan.
Kumsaan dabalataan rakkoon jiru namoonni wiiggii [rifeensa nam-tolchee] kaawwachuun saamichaafi uummata dararan jiru jedha.
Gama biraan ijoolleen manumaa baatee deebitee maatiishee saamtus jirti. Humni keenyas qabeera, garuu gaafa tarkaanfiin fudhatamu ijoollee keenya jechuun komachuun jira. Kanaafuu, hattuu saaxiluun dirqama taha, jechuun dubbata.
Marii karaa nagaa
Itoophiyaa keessatti waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen walqabatee lubbuu kumaatama galaafachuun, miliyoonota ammoo qe’ee irraa buqqiseera.
Haaluma wal fakkaatuun naannoo Oromiyaa kutaalee adda addaa keessa sababii waraana motummaan hidhattoota WBO waliin waggoota sadan darbaniif taasisuuf, haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhaqan jedhamaniin raawwatamuun uummanni hedduun gama sadiinu rakkoof saaxilamaa jiraachuu himata.
Hawwaasni idil-adunyaas waraanni Kaaba biyyattiitti jalqabe karaa nagaa akka xumuramuuf waamicha gaggeessaa turan. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaafi siyaasaa biyyattii ni fura jechuun komishinii hundeessuun marii biyyaaleessaa qopheessaa jira.
Mariin kun qaamolee waraanatti jiranis hin hammatu taanaan rakkoo biyyattiif furmaata waaraa fida jedhe hin amanu jedhe ture International Crisis Group‘ irraa Wiiliyaam Daavinsan.
Hogganaan TPLF Dabretsiyon G /Mikaa’el ammoo karaa dippilomaatotaan haala al-kallatt ta’een motummaa waliin dubbataa akka jiru himaniiru.
Haata’u malee dubbii himaan Ministera Dhimma Alaa Itoophiyaa Ambaasadar Diinaa Muftii ammoo hanga ammaatti mariin nageenyaa TPLF waliin mootummaan jalqabe hin jiru jechuun BBCtti himan.
Marroo Dirribaa hanga ammaatti ‘waamichi marii nageenyaa taasisuuf ifatti nuuf dhiyaate hin jiru’ jedhe.
”Lola kan gaggeessaa jiruuf nageenyi karaa nagaa waan dhabameef karaa waraanaa deebifanna jenneeti. Xumurri waraana kanaas saba keenyaaf nagaa waaraa fida jenneeti.”
Osoo wal hin loliin karuma nagaatiin kan furamu yoo tahe, ejjennoon keenya kaleessas ammas hin jijjiramu, mari’achuuf qophiidha jedhe.
”Afeerraan isaa yoo jiraate bakka qaamni sadaffaa walabaa taheefi hin loognee jiruttii, akkasumas taajjabdootni idil-adunyaa jiranitti waliin mari’achuu ni dandeenya. ”
”Silaa nagaa buusuun yoo barbaadame qaamni waldhabee qawwee walitti fudhate gidduutti yoo dubbatamedha. Amma kun tahaa hin jiru.”
Marii biyyaalessaa kana keessatti qaamoleen kun hammatamuufi dhabuu ilaalchisee hanga ammaatti mootummaan Itoophiyaa waan ibse hin qabu.
Kana dura Hoogganaan Biiroo Nageenyaa Oromiyaa Obbo Shaafiin hidhattooti ‘afaaniin araara jedhu malee araara hin fedhani’ jechuun qeeqanii turan.
Hidhattoonni qondaaltota EU fi UN waliin dubbachuu kan gaafatame Marroon bakka bu’aa akka qaban himuun, ”ammatti waliin dubbachuun jiraachuus, ykn jiraachuu dhiisus mala waan ta’eef, ammatti dubbichi dheedhii waan taheef siif himuu hin danda’u” jedhe.
Dabalataan WBO karaa dubbi himaa isaa Odaa Tarbii kana dura ibsa kenneen mariin biyyaalessaa mootummaan qopheessaa jiru hawwaasa idil-adunyaa irraa beekamtii argachuufi deeggarsa argachuuf malee furmaata kan fiduuf miti jedhe ture.
Marii dhugaan akka gaggeefamu yoo barbachise bakka qaamni sadaffaan jirutti gaggeeffamu fi qaamoolee hundas hammachuu qaba jedhe Odaan.
Hogganaan TPLF Dr Dabratsiyoon G/Mikaa’el gamasaatiin marii nageenyaa jechuun waan mootummaan qopheessu kun ”of cimsuuf itti fayyadamuuf” jechun qeeqaniiru.
Dabratsiyoon gama isaaniin qabxiilee shan mariif hin dhiyaatan jedhan keessaa tokko humni waraanaa isaanii akka tahe himan. Humna kana ni daballa malee hin hiikkachiisnu jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa TPLF fi WBO kan ”ABO Shanee” jedhu shororkeessummaan farraje waliin marii nageenyaaf taa’uuf, jalqaba dhaabbileen kunneen galmee shororkeessummaa jalaa bahuun dirqama jedhu xiinxaltootni siyaasaa.
BBC Irraa Odeeffanne
Odeessa Kaaba Xoophiyaa
No Comments on Odeessa Kaaba Xoophiyaa
Hidhattoonni TPLF waliin hariiroo qaban naannoo Amaaraa keessatti ta’e jedhanii namoota nagaa ajjeesuu, dubartoota gareen dirqisiisanii gudeeduu fi qabeenyaa dhunfaa fi mootummaa saamuu gabaasni haaraan Amnestii
Dhaabbati mirga namoomaaf falmu kun akka jedhutti
dubartoota dirqiin gudeedaman keessa ijoolleen hanga ganna
14 keessatti argamu.
Yakkoonni kunneen bakkeewwan Cinaa fi Qobboo jedhamanitti Xumura Hagayyaa fi jalqaba Fulbaana bara 2021 wayita humnoonni TIgraay naannawa san to’atanii turanitti
raawwatame jedha gabaasni kun.
Humnooti Tigraay magaalota naannoo Amaaraa to’atanii turan
keessatti yakkoota suukkanneessoo raawwachuun yoo himataman kun kan jalqabaa miti.
Qorannoo Komiishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fi
Waajjirri Mirgoota Namoomaa UN waliin taasisan keessatti
humnooti gama lamaanuu yakkoota suukkanneessoo
raawwachuun gabaafamee ture.
Haata’u malee TPLF loltoonni isaa yakkoota kana raawwachuu
waakkatee qorannoon walabaa akka godhamu gaafatee ture.
BBC Irraa Odeeffanne.
TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu mariin al-kallattii adeemaa jiraachuu Dabratsiyoon dubbatan.
No Comments on TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu mariin al-kallattii adeemaa jiraachuu Dabratsiyoon dubbatan.
Dr. Dabratsiyoon P.T.Region
Hogganaan Adda Bilisa Baasaa Tigraay (TPLF) Dabratsiyoon Gabramikaa’eel (Dr) gareesaaniifi mootummaa Itoophiyaa jidduutti haasaan al-kallattii taasifamaa jiraachuu BBCtti himan.
Itti dabaluunis yaaliin dippilomaasii al- kallattii kunis bu’aa murtaa’e mul’isaa jiraachu dabaluun himan Dr Dabratsiyoon.
Dabratsiyoon gaaffiifi deebii BBCNewhour waliin taasisaniin akka jedhaniitti, mariin dippilomaasii kallattiin alaa karaa Gamtaa Afriikaa, UN fi Keeniyaatiin mootummaa waliin mariin gaggeeffamaa jiraachu dubbatan.
Waa’ee marii kallattii hintaane gaggeeffamaa jira jedhamu kanaa ilaalchise gama mootummaa Itoophiyaarra hanga ammaatti kan jedhame hin jiru.
Waraanni Tigraayiitti Sadaasa 2020 eegalamuun namoota miiliyoonotaan lakkaa’aman bakka jireenyaa isaanii irra akka buqqa’aniif kan dirqisiise yoo ta’u, kumaatamni lubbusaanii itti dhabaniiru.
Dhaabbanni Motummoota Gamtoomanii (UN) gabaasa torban darbe keessa baaseen, Tigraay keessatti ummanni %40 ta’u hir’ina nyaataa cimaadhaan rakkataa jiraachuu himeera.
Hogganaan TPLF kun akka jedhaniitti, waraanicha dhaabuuf yaaliin dippilomaasii al-kallattii motummaa Itoophiyaa waliin taasifamaa jiru bu’aa agarsiisaa jiraachuufi mallattoowwan fooyya’insaa akka jiran kaasan.
Dabratsiyoon (Dr), waraanni gaggeeffamaa jiru furmaata nagaa akka argatuuf akka barbaadaniifi garuu ammoo mirga uummata Tigraay eegsiisuuf barbaachisaa ta’e yoo argame akka lolan ibsaniiru.
Guyyootaan duras APn MM Abiy Ahimad waliin turtii taasisuu isaanii kan himan, dura taa’aa koree Dhimmoota Ummata Itoophiyaanot Ameerikaa kan ta’an Obbo Masfiin Taganuu eeruun, MM humnootii TPLF waliin mari’achuuf qophii ta’u gabaasuun ni yaadatama.
Maricharratti MM Abiy ”mariin ni jiraata. Mariin bu’aa biyyaatiif dursa keennu sababa qabeessaan ni ta’a” jechuu APn dura ta’icha waabeffachuun gabaasee ture.
Gabaas MM Abiy dubbataniiru jedhu kana hordofuunis, dubbi himaan Ministeera Dhimma Alaa, TPLF dhaaba shororkeessummaan farrajame ta’u kaasuun mariin akka hin jiraane dubbate ture.
Jijjiramoonni mul’ataa jiraachu
Dabratsiyoon (Dr) turtii BBC waliin taasisaniin, gaaffii waraana baatiiwwan 15 fudhateen bu’aa maal buuftan? jechuun gaafatamaniif, ”Hunda caalaa duula ‘duguggaa sanyii’ mootummaa federaalaa, Ertiraafi humnootii Amaaraatiin nurratti labsame irra hafneerra,” jedhan.
Itti dabalunis ”Waraana Baatiiwwan 15n darbaniif haala hamtuu dubbachuun hin danda’amnee keessa turre,” jedhan.
Akkasumas badiinsiifi barbadiinsi olaanaan qaqqabuu kaasuun, ”wanti guddaan ajjeechaa raawwataa ture hunda jalaa lubbuun hafu keenya jedhan. Gara dhumaatti imaluuf qophiidha,” jedhaniiru.
Waraanni wayita eegalamu kaayyoo siyaasaa akka qabaachaa turan yaadachiisuun, lubbuun hafuun qofti gahaadhaa? jedhamuun kan gaafataman Dabratsiyoon, ”Waanti guddaan akka uummataafi akka mootummaatti hafnee itti fufuu keenya” jedhan.
”Mirgoota bu’uraa keenya kabachiifachu, badiinsaafi barbadiinsa qaqqabeef ittigaafatamtoonni akka jiraatan taasisuufi gaaffiileen siyaasaas deebii akka argatan taasisuudha. Gara sarara dhumaa sanatti imalaa jirra,” jedhan.
Badiinsaafi sarbamoota mirga namoomaa qaqqabeef itti gaafatamtoonni jiraachu qaba kan jedhan Dr Dabratsiyoon, ”sarbama mirga namoomaa jaarraa kana keessa hin raawwatamne nurratti raawwatan. Waan isaan ittiin nu himataniif ammoo nuti qophaa’oodha hunduu akka qoratame adda bahuuf. Wanti isaan nurraan gahan gonkumaa kan ittiin nu himataniin kan madaalchifamu miti,” jedhan.
Itti dabaluunis tarii miidhaan sarbamaa humnootii isaanitiin Amaaraafi Affaar keessatti qaqqabe yoo jiraate naamusa dhunfaatiin ta’u malee kan jedhan Dr Dabratsiyoon, ”kan Tigraayitti raawwatame garuu badii itti yaadamedha,” jedhan.
Ammaan tanas humnootii TPLF Affaar keessatti namoota nagaafi ollaa irratti haleellaa gaggeessaa jiraachu dhagahaa jira. Kaayyoon ammaa Affaar keessa seentaniif maali? jedhamuun gaaffii BBCn dhiyaateef, ”Kaayyoon keenya achii baayyee murtaa’aadha. Gama Affaariin humnootii Affaar fi Ertiraa akkasumas milishoota Affaariin torbanoota hedduuf irra deddeebiin haleellaan nurratti raawwatamaa ture.
Daangaa Tigraay keessa seenuun haleellaa nurratti raawwatan. Deeggarsi namoomaa akka gara Tigraay hin seenneef danqan. Tigroota dhibbaatama ajjeesuun kumaatama hidhanii qabeenyaasaanii saamaniiru. Kanaaf deebii kennudha kaayyoon keenyas,” jedhuun deebiisan Dr Dabratsiyoon.
Kana malees ammatti namoonni sababii beelaatiin du’aa jiraachu kan himan Dabratsiyoon, geejjibni lafoofi qilleensaa akkasumas maallaqni ykn malli komunikeshinii akka hin jirre kaasan.
Dabalataanis, Gamtaan Afriikaa, Keeniyaafi Motummooti Gamtoomanii waraanicha dhaabuun furmaanni nagaa akka argamu gochuuf hojjataa jiraachu himan.
Kanaan walqabatees, motummaa federaalaa waliin haasaafi marii eegaluu kan himan Dr Dabratsiyoon, jijjiramooti muraasnis mul’aa jiraachuu kaasan.
Mariin taasifamaa jiruuf waraanni akka dhaabbatu, deeggarsiifi tajaajiloonni bu’uuraa akka dhiyaatan, dhukaasa dhaabuun mariirratti hundaa’e akka jiraatu, humnootiin Ertiraafi Amaaraa Tigraay keessaa akka bahaniifi mariin biyyaaleessaa akka gaggeeffamu akka barbaadan Dabratsiyoon (Dr) dubbataniiru.
Yaalii nagaa buusuu
Ameerikaafi Gamtaan Afriikaa humnootiin waraanaa jiran garaagarummaasaanii karaa mariitiin akka furuun, kanneen waraanaan miidhamaniif deeggarsi namoomaa akka qaqqabuuf yaalii taasisaa turaniiru.
Ergamaan Addaa Ameerikaa kan Ganfaa Afriikaa Ambaasaadar Jeefirii Feeltmaan irra deddebiin gara Finfinneetti imaluun MM Abiy waliin wal argaa turan. Humnootii TPLFs biyya ollaa Keeniyaatti arguun dubbisuu himaniiru.
Akkasumas ergamaan addaa Gamtaa Afriikaafi pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Oliseeguun Obaasaanjoo MM Abiy Finfinneetti, dureewwan TPLF waliin Maqaleetti irra deddebiin mariyataniiru.
Torban darbe ammoo ergamaan addaa Ameerikaa kan Gaanfa Afriikaa haaraan ambaasaaddar Deeviid Saatirifiildi Itoophiyaatti dowwannaa taasisaniin qondaaltoota mootummaa waliin mari’achuun gabaafameera.
Yaaliiwwan kanneen hunda booda egaan yaaliin dippilomaasii taasifamaa jiru bu’aa muraasa argamsiisuun Dabratsiyooniin (Dr) kan himame.
Tuuti Gadaa Michillee warra Dullachaa Karrayyuu erga ajjeeffamanii booda Gadaan isaanii akkam ta’aa?
No Comments on Tuuti Gadaa Michillee warra Dullachaa Karrayyuu erga ajjeeffamanii booda Gadaan isaanii akkam ta’aa?
Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee miseensonni luba Michillee, kan gosa Dullachaa ta’an bakka waggaa afur dura qubatanitti erga ajjeeffamanii qaawwi bulchiinsaa uumameera.
Hawaasni bulchiinsa sirna Gadaan jiruu fi jireenyisaa qajeelu kunis erga taateen kun mudatee tasgabbaa’ee hooggansa Sirna Gadaasaa kana bakkatti hin deebiifanne.
Ofii egereen Gadaa Karrayyuu kana booda akkam ta’a? Eenyutu bakka bu’ee ga’ee hooggansaa ba’a? Walumaagalatti abbaan Gadaa osoo aangoo hindabarsiin dura yoo du’u akkamiin gadaan itti fufa?
”Yoo kaan waaqaa itti hirkafatu, yoo kaan diinaa dursa gumaa baasu”
Barreessaa Gamtaa Abbootii Gadaa kan ta’an Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa, ”Abbaan Gadaa dirqama aangoo inni fudhatee keessaa inni jalqabaa diina daangaasaa weeraruuf yookiin sabasaa miidhuuf dhufe jalaa hin dheessu,” jedhan.
Egaan abbaan Gadaa tokkoo ”haala akkasii keessatti lubbuusaa dabarsee waan aarsaa godhuuf diinaan du’uu danda’a. Guyyaansaa yoo geessee ammoo dhukkubsatees du’uu danda’a. Kan Abbaa Gadaa Karrayyuu kun diinaan ajjeefame waan ta’eef waan hunda dura gumaatu ba’uu qaba,” jedhan.
Wayita Abbaan Gadaa osoo aangoorra jiruu diinaan ajjeefamu sirna kabajaa fi gootummaasaa faarsutu geeggeeffama kan jedhan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa, Sirnasaa kanarratti boollasaa daadhiin haa guutu, Jannanni isaa jimaa haa magarsu jedhu.
”Fakkeenyaaf akka kan Karrayyuutti kan amma du’e Dullacharraati. Kanaafuu miseensi Dullachaa boollasaa daadhiin akka guutu kadhatee, awwaalchasaatti jimaa kabee wayita as garagalu hulluuqqoo ba’a. Hulluuqqoon ba’amee yoo abbaan beekame gumaa nama saniitu ba’a.”
”Erga gumaan ba’ee sabni qabbaneeffatee booda bakka abbaa Gadaa san itti hirkafatu. Itti hirkafata malee abbaa gadaa biraatuu hin muudu. Korma qalee itti hirkafatee erga jedhee booda sirni Gadaasaanii sun bakkatti deebi’a,” jedhan.
Hawaasi tokko bakka abbaa Gadaa isaa itti hirkafata jechuun abbaan Gadaa du’e sun hanga yeroon Gadaasaa obba’utti boollisaa kabaja qaba, namni biraan bakkasaa bu’ullee isumatu akka Abbaa Gadaatti ilaalama jechuudha.
Abbaan Gadaa Karrayyuu yaa’asaa waliin kan ajjeefame aangoo qabatanii waggaa sadaffaarra osoo jiraaniiti, kanaafuu gosi Dullachaa fi hayyuun saba dullachaa mari’atee murteesaa ni fudhata.
”Uummanni karrayyuu uummata durii ka’ee Gadaasaatti cichee waan jiruuf hayyuu Gadaa fi saba qajeelchu qaba, isaaniin Gadaan qajeela,” jedhan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa.
Warra korma garaa hidhan (eegdota/jaldhaaba abbaa Gadaa/abbaa bokkuu) kan abbaa Gadaa Kadir Hawaas waliin ajjeefaman Jiloo Diidoof obooleessa maandhaa/quxisuu kan ta’an Obbo Lalisaa Bareechoo, uummanni Karrayyuu yeroo ammaa qe’eerraa gara daangaatti baqatee faffaca’ee waan jiruuf sadarkaa jila taa’ee Gadaasaa sirreeffaturra hin jiru jedhe.
Lalisaan akka jedhutti, akka sirna Gadaa Karrayyuutti bakka abbaa gadaa Kadir Hawaas namni bakka bu’u maatii keessaa ta’uu quba qaba.
”Silaa bakka kana bu’ee kan gaggeessu obboleessa isaa Gadaa Hawaas. Inni amma biyya keessa waan hin jirreef obboloota jiran keessaa nama tokkotu bakka bu’ee gaggeessa. Daa’ima xiqqoo qofatu jira yoo ta’ellee daa’ima sanatu bakka bu’a malee maatii keessaa hin ba’u,” jedha.
”Maatii keessaa hunduu dhumanii daa’imni xiqqoon yoo jiraatte hawaasni daa’ima sanatti aangoo kenna, garuu hanga daa’imni of barutti beekamtiidhaan nama ogummaa fi muuxannoo qabu bakka buusuufii danda’u.”
Yeroo ammaa Kanaadaa kan jiran Aab Gadaa Hawaas (hangafi Abbaa Gadaa Kadir Hawaas-kan boqotan), waggaa 11 jiruu baqaarra erga turanii boda bara 2018 sirna baallii fuuchuu irratti hirmaachuuf biyya galanii yeroo sanas haalli waan hin mijanneef obboleessa isaanii quxisuu/maandhaa akka bakka buusan himan.
Lubni Michillee durumaanuu wayita rakkoof namoota eeggattummaan kaa’eera kan jedhan Aab Gadaa Hawaas, ”Abbaan Gadaa/Abbaan Bokkuu, Warri korma garaa hidhe(eegdonni/jaldhaabi Abbaa Gadaa), Abbaan Duulaa, Abbaan Diingadee fi kaan eeggattootaa sadi sadi filatanii qabu. Kanaafuu isaanumaaf faajjii lallabuu malee filannaan haaraa gaggeeffamu hin jiru,” jedhan.
”Abbaa Gadaa ta’uuf kan eeggattummaan jiru ilmi abbaa Gadaa Kadir Hawaas, Hawaas Kadir Boruu waan jiruuf isuma jajjabeessuudha hojiin keenya. Isa harkatti kan tissu namni biraan ammallee ni jira.”
Akka Sirna Gadaatti namni abbaa Gadaa ta’u umurii dabballummaatti baannatamee, erga lallabamee waggoota dheeraaf gadaa baratee booda waggaa 40 wayita ga’u Abbaa Gadaa ta’a.
Garuu namni haala kanaan gulantaa Gadaa keessa darbe wayita umuriin darbus ta’e rakkoo garaagaraan hirmaachuu dadhabe obboleessa bakka buusu.
Fakkeenyaaf akka Lalisaan jedhutti, Gadaa Karrayyuu michillee warra Dullachaaf kan qophaa’ee ture Gadaa Hawaas rakkoo siyaasaa isarra ga’een wayita biyyaa baqatu, kan bakka buufame obboleessa isaa kan amma ajjeefaman Kadir Hawaas.
”Ammas Gadaa Hawaas jira waan ta’eef yoo mijateefii biyyatti kan deebi’u ta’e isumatu bakka bu’ee gaggeessa. Yoo isaaf hin mijanne immoo obboloonni waan jiraniif isaan keessaa namni bakka bu’ee gadaan akkuma duriitti itti fufa. Kun kan ta’u Gadaa Michillee kan warra Dullachaa keessatti qofa. Gadaan kaan rakkoo hin qabu.”
Aab Gadaa Hawaas gamasaaniin, ”yeroon obbboleessa kiyya bakka buuse ani duuba taa’ee akka gorsaatti akkan itti fufu maanguddoo waliin dubbanne. Kanaafuu waggoota hafan arfan hanga Halchiisi aangoo fudhatutti hojii kiyya ittan fufa. Qaamni eeggataan duraanuu qophaa’ee jira waan ta’eef deemee achitti argamee abbaa gadaa ta’uun dirqama miti,” jedhan.
Lubni Gadaa Michillee gosoota Karrayyuu Dullacha (hangafa) fi Baasoo (maandhaa/quxisuu) lamaanuu keessaa yaa’a gadaa qaba.
Tuuti Gadaa ajjeefaman kan Dullachaa yoo ta’u, kan Baasoo garuu yaa’isaa akkasumatti jira.
”Kanaafuu warri quxisuu kun gadaa kana maal gochuun akka danda’amu warra hangafaa waliin dubbatu. Akka Gadaa Michilleetti akkamiin deebisanii ijaaruu akka qaban erga mari’atanii booda sabnillee irratti jilata,” jedhe Lalisaan.
Namoonni Gadaa kana keessaa ga’ee qabanii miidhaan irra ga’e kan hawaasa keessa jiranillee deebi’anii Gadaa kana ijaaruu keessatti ga’eesaanii ni gumaachu.
”Yaa’i Gadaa Karrayyuu akkuma bakka tokko qubatee waliin jilatu, kanneen uummata keessa jiraatanillee ni jiru. Isaan ajjeechaa jalaa baraaraman kunneen amma dhufanii qaawwa uumame cufuu danda’u. Bifa kanaan jaarsi biyyaa, beekaan ba’ee Gadaa kana bakka deebisanii itti fufsiisu.”
”Balaan Gadaa Karrayyuu mudate kan manatti nu galchu hin turre”
Gamtaan Abbootii Gadaa Oromoo taatee Karrayyuutti mudate irratti hamma irraa eegamu hin hojjenne jedhan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.
”Sirna Gadaa cunqursaa hedduu dandamatee yeroo ammaa hambaa UNESCO ta’ee addunyaarratti beekame kana tiksuun ga’ee Gamtaa Abootii Gadaa ture. Garuu nuti haga nurraa eegame hin hojjenne,” jedhan.
”Keessattuu wayita akka Karrayyuu mudate kana gaaga’amni jabaan sirna Gadaa mudatu, yoo alangeen yeroon kennamuu baate birmateefii bakkatti deebisuun hojii gamtichaati.”
Bal’ina Oromiyaa fi caasaa Gadaa bal’aa inni qabu, akkasumas hanqina loojistikii fi rakkoo siyaasa biyyaa akka madda rakkoo ijootti kaasan Abbaan Gadaa.
”Wayita rakkoon akkanaa Karrayyuu mudatu nuti akka Gamtaa Abootii Gadaa Oromootti manattuu galuun nurra hin turre. Kanarra roorroo hamaan hin jiru. Kan har’a yaa’a Gadaa Karrayyuu akkas goote boorillee nuuf gumee qaratte jechuudha,” jedhan.
”Hagam akka geenyee jirru kan nutti mul’isedha”
Abbaan Gadaa uumaa fi uumama kabajee dhala namaa hundaaf eegumsa gochuuf kan dhaabbatedha malee paartii siyaasaaf kan dhaabbate miti kan jedhan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa, wanti Karrayyuutti raawwate uummata Oromoo kan shororkeesseefi abdii kutachiiseedha jedhan.
”Uummanni Oromoo safuu fi aadaan, hambaan inni qabu harkaa harcaatee, tokkittiin kan harkatti haftee jirtu sirna Gadaa kana qofa. Uummatichi sirna kana qusatee addunyaatti beeksisee UNESCO irratti wayita galmeessisee jirutti har’a abbootii Gadaarratti haala kanaan ajjeechaan kan raawwatamu yoo ta’e kun uummata Oromoo mara kan shororkeesseedha malee uummata Karrayyuu qofaa muti,” jedhan.
Seenaa biyya kanaa keessatti takkaa balaan akkasii abbootii gadaa mudatee hin beeku kan jedhan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa, hagam akka geenyee jirru kanarraa hubachuu dandeenya jedhan.
”Bara Minilik irraa kaasee hanga dhufee bulchiinsa wayyaaneen ba’utti wanti akkasii abbaa Gadaa mudatee hin beeku. Bara harkaa fi harma muraa Aanolee, bara Calii Calanqoo abbaan Gadaa akkanaan hin ajjeefamne. Sirni keenya akka kana kabaja dhabee hin beeku. Kanarraa hagam akka Oromoon salphatee jiru hubanna.”
Akka sirna Gadaatti lubni aangoo harkaa qabu akkuma ofii kan isa dura turerraa baratee aangoo qabate, isa itti aanu ammoo barsiisaa bilcheessaa deema.
Wayita gadaan aangoo harkaa qabu bittinnaa’ee badu qaawwaa dhalootaa gadaa keessatti uumamuu mala sodaan jedhu jira.
Yaaddoo kana kan qooddatan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa, ”garuu duunullee Gadaa Karrayyuu inuma bakkatti deebisna,” jedhan.
Abbootiin Gadaa Maccaa, Booranaa, Gujii, Ituu-Humbannaa, Afran Qalloo, Sikkoo Mandoo-hunduu akkasumas uummanni Oromoo gumaan Karrayyuu akka ba’uufi Gadaan bakkatti akka deebi’uuf wareegama barbaachisu kaffaluu qabu jechuun dhaaman.
Walitti bu’iinsa qarqara Finfinnee hordoftootaafi humnoota nageenyaa gidduu uumameen lubbuun darbe
No Comments on Walitti bu’iinsa qarqara Finfinnee hordoftootaafi humnoota nageenyaa gidduu uumameen lubbuun darbe
Ibsa waa’ee suuraa,Guyyaa har’aa Jimaata Taabonni Maaramii Waybalaa gara bataskaanatti nagaan deebi’eera
Walitti bu’iinsa Kabaja Ayyaana Cuuphaa irratti qarqara Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Buraayyu daangessutti mudateen lubbuun namootaa darbuu kanneen ijaan argan BBC’tti himan.
Taateen kunis walitti bu’iinsa Guyyaa Kamisaa ALI Amajjii 12, 2014 hordoftoota Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Taabota Maaramii Waybalaa gaggeessuuf bahaniifi humnoota nageenyaa gidduutti dhalateen mudate.
Sagantaa kana irratti hordoftonni amantichaa BBC’n dubbiseefi ijaan argan waldhibdeen kun itti fayyadama alaabaa walqabateen mudate jedhan.
Viidiyoon taate kana mul’isaniifi miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodaman irratti konkolaataan poolisii sibiila uffate akkasumas namoonni dhukaasa dhagahanii yoo fiigan mul’ata.
Akka hordoftoonni jedhanitti humnoonni nageenyaa dhukaasaafi gaazii imimmaanessuu dhukaasuu isaanii hordofee yoo xiqqaate lubbuun namoota lamaa darbuu akka hin oolle BBC’tti himaniiru.
Tajaajilli Kominikeeshinii Mootummaa Federaalaa ibsa gaafa Jimaataa baaseen Itoophiyaa guutuutti ayyaanichi haala nagaan kabajamuus dhihoo magaalaa Finfinneetti garuu rakkoon uumamuu mirkaneesseera.
”Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoofi Buraayyuu walitti fiduurratti naannoo Bataskaana Waybalaatti rakkoo uumameen kabajii ayyaanaa jeeqamuufi lubbuu namaarratti duuniifi miidhaan cimaa gahuu beekameera,” jedheera.
Mootummaan Federaalaa taatee kanaan ”guddaa gadduu” ibsuun waan raawwate qoratee qaamoleen badii raawwateef gaafatamoo ta’an seeraaf dhiheessa jedheera.
Ibsi mootummaa lakkoofsa namoota du’aniifi sababa walitti bu’iinsaaf ka’umsa ta’eerratti waan dubbate hin qabu.
Ayyaanni Cuuphaa cuuphamuu Gooftaa Iyyasus Kiristoos yaadachuuf hordoftoota Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akkasumas biyyoota addunyaa birootti kabajama.
Miidhaa qaqqabeerratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalii BBC’n poolisiifi hospitaala irraa odeeffachuuf taasise hin milkoofne.
Poolisin Magaalaa Buraayyuu dhimma raawwate BBC’tti dubbatuuf erga beellama qabatanii booda bilbila kaasuu didan.
Hambaalee Itoophiyaan UNESCO’tti galmeessifte keessaa tokko Ayyaan Cuuphaadha.
Itoophiyaa keessatti dhimmoota waldhabsiisaa ta’aniifi madda walitti bu’iinsaa ta’an keessaa tokko itti fayyadama alaabaati.
Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Lallabaan Bataskaana Gadaama Iyyasuus Barsiisaa Issubaalaw Taabota Maaramii Waybalaa gara bataskaanatti yoo deebisuuf jedhan dargaggootaafi humnoota nageenyaan hin dabartan jedhamanii dhorkamuu isaanii BBC’tti himan.
”Guyyaa kaleessaa Taabotonni bakka bulaniiti gara bataskaanatti yeroo deebi’an bakkee Bul/Mag Finfinneefi Oromiyaa biratti humnoonni nageenyaa mootummaafi dargaggoon ulee qabatan waliin ta’un hindabartan jedhanii muddamni dhalate.”
”Maali jennee yoo gaafannu alaabaa uffatanii darbuu hin dandeessani jedhamne,” jedhan.
Barsiisaa Issubaalaw humnoonni nageenyaa qawweefi imimmaanessituu waan dhukaasaniif lubbuun namaa darbuurra kan darbe hedduun miidhaa salphaafi cimaaf saaxilamu dubbatu.
Tajaajiltuun Mana Barnootaa Sambataa Gadaama Iyyasuus kan taateefi bakka rakkoon dhalate kan turte Shamarree Nigist Getaachaw walitti bu’iinsa booda kanneen rasaasaan miidhaman hordoftoota amantichaa fuuldurarra turan ta’u himte.
Haala guyyaa Kamisa ALI Amajjii bultii 12, 2014 ture wayita ibsitu waaree booda gara sa’aatii 11 Taabota gara bataskaanatti osoo deebisaa jiranii bakkee Yashii Dabalee jedhamee beekamutti ‘hin dabartan’ jedhamuu dubbatti.
”Bar-dheengaddaas darbuu hin dandeessan jedhamnee turre. Maaltu akka uumame akka qulqulleessan qindeessitoonni ergaman,” jechuun BBC’tti himte.
Eegasii qaamoleen hin dabartan jechuun himataman kanneen Taabota gaggeessaa jiran akka darban kanneen uffata magariisa, keelloofi diimaa qabu uffatan garuu akka hin dabarre dubbatan jechuun himti.
”Namoonni hedduu uffata magariisa, keelloofi diimaa ofirraa qabu, qoloo, tishartii uffataniiru. Isaan immoo filannee galchina jedhan.
”Qindeessitoonni kanatti wal hin galle. Dubbii kana booda imimmaaneessituun dhukaasamuu eegale. Kanneen kufaniifi irra eejjetame jiru,” jechuun haala ture dubbatti.
Hanga yoonaa namni meeqa akka miidhame baruu hin dandeenye kan jettu Tigist, ”Tajaajiltonni bilbilli isaanii hin hojjenne, eessa akka jiran hin beekne jiru,” jetti.
Barsiisaa Issubaalaw gama isaaniin itti fayyadama alaabaa waliin walqabatee waggoota sadan darban wantoonni walfakkaataa mudataa akka turan himu.
”Kan anillee beeku kuni yeroo sadaffaafi. Dhimmicharratti qondaaltota naannawichaa waliin mari’achuuf yeroo yaalamu ‘gubbaati ajajamne’ deebii jedhu kennu,” jechuun himu.
”Biyya keenyatti akka lammii lammaffaa lakkaa’amne ‘asiin hin dabartu, asiin hin galtu’ jedhamuun baay’ee nama gaddisiisa” jechuun gadduu isaanii ibsu.
Qaami mootummaa dhimmichi isa ilaallatu waan raawwate qoratee akka ummataaf beeksisu gaafataniiru.
Har’a akkamiin kabajame?
Hookkara guyyaa Kamisaa mudateen Taabotni Maaramii Waybilaa Bataskaanatti deebisuun waan dadhabameef Bataskaana Madaalaanamii Qaraaniyoo akka turu taasifamuun ibsameera.
Guyyaa har’aa garuu hordoftoonni mana amantichaa bakka argamanitti sagantaan sirnaan raawwachuu BBC’n odeeffateera.
”Guyyaa kaleessaa hin dabartan bakka jedhamne Yashii Dabalee dabarreerra. Hunduu nagaadha,” jechuun Nigist guyyaa keessa BBC’tti himte. Barsiisaa Issubaalewis yaada walfakkaataa kennan.
Seenaa Gabaabaa Fitawurarii Jiidhaa Tufaa
No Comments on Seenaa Gabaabaa Fitawurarii Jiidhaa Tufaa
Jiidhaa Tufaa Ayyaantuudha. Ayyaantuu Jiidhaa Tufaa kan dhalatan abbaa isaanii Obbo Tufaa Barii fi haadhaa isaanii Aadde Simbirroo yoommuu ta’u; kan dhalatanis bara ”mashashaa” jedhamuudha. Iddoon itti dhalatan immoo Godina Shawaa Dhihaa Aanaa Jalduu iddoo addaa Siibaa Garjii jedhamee waamamuttiidha.
Ayyaantuu Jiidhaa Tufaa osoo maqaa kabajaa kanaa fi Ayyaantummaa osoo hin argatin dura obbo ‘Jiidhaa Tufaa’ jedhamanii waamamaa turan. Ayyaantuu Jiidhaa Tufaa yeroo ijoollummaa isaanitti jiruu baadiyyumaatin waan humni isaanii danda’een maatii isaanii gargaaraa guddatan. Maatii isaanii fi hawaasa naannichaa biratti naamusaa fi naatoo guddaa qaban ture.
Yeroo dargaggoomanii gaa’elaaf gahan durbee Warqinash jedhamtu waliin bultii hundeeffatanii waliin jiraachuu eegalan. Osuma Aadde Warqinash waliin jiraachaa jiranii weerara biyyarraa qolachuuf loltummaan Afe Nigus Xilaadhaf qacaramanii akka maqaa yeroo sanaatti kutaa biyya sidaamootti yeroo baay’eedhaaf jiraachaa turan. Akkasiin osoo lolanii lolchiisaa jiranii haala isaan hin eegnen tasa Ayyaanni dhugaa Oofaa irra bulee argame. Yeroo kanas hojii idilee isaanii adda kutuudhan gara iddoo dhaloota isaanitti deebi’uuf dirqaman. Osoo hin turin iddoo dhaloota isaanii Siibaatti deebi’uun jiraachuu eegalan.
Kana booda seera Ayyaannii isaanii barbaadu hunda erga guuttatanii booda kan wal dhabe walitti araarsun biyyaaf nagaa kadhachuudhaan, yoo hoongen biyya muuddate Waaqa isaanii kadhachuudhan bokkaa roobsisuun midhaan facaasuun rakkina tokko malee haamamee tumamee gootaraatti akka galu uumaa isaanii kadhachuun ummata isaanii tajaajilaa turan. Barri kunis bara mootittii Zawudituu Minilik II ture.
Ayyaantuu Jiidhaa Tufaa hojii gaarii ummata isaanif hojjatan ilaaludhaan ummanni walitti qabamuudhan kaka’umsa mataa isaanin mootummaan osoo hin mari’atin waamicha ”Obbo”jedhamu irraa kaasudhaan maqaa kabajaa ”Fitawraarii”jedhamu muudanii ”Fitawraarii Jiidhaa Tufaa” jedhanii waamuu eegalan.
Yeroo tokko Nigist Zawudituun waa’ee maqicha kabajaa kana Fitawraarii Jiidhadhaan ”muudama kana eenyutu siif kenne? Eenyutu si muude?osoo nuti hin beekne jettee gaafatte. Isaanis deebii gabaabadhaan ”Nigist ummata ani naannoo keessa jiraadhudha” jedhanii deebisaniifi. Nigisti Zawdituunis deebii Fitawraarii Jiidhaa ajaa’ibsiifattee ”haa ta’u, nutis muudama kana haayyamne”jedhanii mirkaneessudhaan mana mootummaatii jalqabee hanga mana jireenyaa isaanii Walmara gahutti xurumbaa afuufamaa Fardaan dabaalamuun mana gahan.
Haaluma wal fakkatun yeroo Nigist Zawudituun duutee Atsee Hayila Sillaaseen aangoo qabatu muudama ‘Fitawraarii Jiidhaa Tufaa” jedhamu kana sagantaa guddaa ummanni bal’aan irratti argamerratti mirkaneessaniifii jiru. Ummanni naannoo hiriira bahanii fudhachuudhan mana isaanii Qobbootti argamutti galan. Ummanni Fardoota hedduun bahee diddiqsaa dabaalan. Sana booda Qobbo irraa ka’uun ummanni gara Kumeetti imalchiisan. Ummanni dibbee rukutuudhaan duultonni yaa’udhaan xurumbaa afuufanii ililtaan kabajanii yemmuu gaggeessan ummanni daandii irratti argamee ture hiriiranii wal ta’uudhan faarsaa dabaalaa turan.
Akkas jechuudhan faarsan;
”Yaa Garasuu warreen maal jedhanii
Jiidhaa Tufaa Warqii shallamanii” jedhuushan sirbaa adeeman. Bara kana waraanni manca’ee waan tureef akkuma sanaan gara mana mootummaatti waamamanii waraanichaaf deeggarsa kan ta’u ummanni waan barbaachisuuf, di sababoota biroon gara bosonaa kan gale mana isaayii bahee kan shokate hundi mootummaan araara kan godhe ta’uu karaa Fitawraarii Jiidhaa Tufaa gabaa fi iddoo ummanni itti sassaabbamu hundatti labsiin himame, ummanni biyya isaaf akka duulanii fi diina akka waraanan jedhamee akka himamuu fi Abbaa duulummaa Fitawraarii Jiidhan gara Goojjamitti akka duulan ergamni itti kenname.
Fitawurarii Jiidhan bu’uruma ergama isaanitti kennameen ummata walitti qabanii gara adda waraanaa Goojjam deemaa osoo jiranii magaalaa Kaachis yommuu gahan ergamaan ergame meeshaa ammayyaa waan hin qabneef waraana qabachuun haa deebi’u jedhamuu isaaniitiin deebi’anii mooraa/mana mootummaa akka eegan ajajaman. Akkuma sanaan waraannichi hoo’ee Xaaliyaanin biyya keenya Weerarte. Yeroo kanatti Atsee H/Sillaaseen gara Maycawu duuluu fi gara ari’amuutti yemmuu deemuuf jedhu Fitawuraarii Jiidhaa Tufaa mooraa keessatti waamanii Obbo Mokonnin H/waldi gumsaa ol aantummaa isaanii kennaniifii mooraa akka eegan Jaanhoyi ajaja Kana erga kennee booda Fitawuraarii Jiidhaa mooraa keessatti waamanii Obbo Mokonnin H/waldeegumsaa olaanaa isaanii kennameefii mooraa akka eegan ajajan.
Jaanhooyi kana erga kennee booda Fitawuraari Jiidhaa ilaaluun “amma yoo duulle ni moona moo ni moo’amnaa?” jedhee yeroo gaafatu battalumatti “Jaanhoyi hin moo’attan, ni moo’amna” jedhanii deebisaniifi.
Jaanhooyi aaridhaan “atis akkas jettee? nuti moonee malee moo’amee hin deebinu! yeroo ijifannoo keenya mirkaneeffannu sanatti ati sobduu ta’uu keetin dirree irrattin si ajjeesa!” jedheen. Fitawuraarin irra deebi’anii ”na ajjeesaa malee jechi koo Kanuma, waggaa Shaniin booda ni deebi’u yeroo sanatti ani isin waliin wal hin arginu” jechuudhan eejjannoo isaanii ibsaniif. Jaanhooyi jecha Fitawuraari Jiidhaa barreeffamaan akka ajaju fi barreeffamichis kooppii lamaan barreeffamee, tokko harka Fitawurarii Jiidhaa, lammaffaan akka waajjira Jaanhooyi taa’u ajaje. Barreeffamichis barreeffamee akka inni taa’u erga ajajee booda Obbo Makonnin H/waldeegugsaa olaanaa kennamiifii eegduu mooraa taasisan. Jasnhooyi gara ari’atamuutti deeme.
Kanaan booda weerara Xaaliyaaniin Itoophiyaa waliin Shaaqaa Ballihuu kan jedhaman safara Xaaliyaanii jiraachaa waan turaniif Shawaaleensaa namni jedhamu boombii Xaaliyaaniitti darbatanii ajjeesuu isaaniitiin kan ka’e eenyun akka ta’e beekuf naannoon yemmuu sakatta’amu haati warraa Fitawurarii Jiidhaa mana jireenyaa Aadde Maammitee kan jedhamanitti galanii yemmuu sakatta’aman Jaanhoyin kan barreessisan jecha Fitawurarii Jiidhaa kooppii tokko warri sakatta’an waan arganiif tarii isaan ta’uu mala shakkii jedhuun barbaaddamanii akka qabamanii murtoof akka dhihaatan ajajni itti kenname.
Fitawurarii Jiidhaa Xaaliyaaniin galee waggaa isaatti Hoolotatti qabamanii hidhaman. Xaaliyaanonni Fitawurarii Jiidhaa dhiheessanii ”ati nama lammii mootummaa kee gargaaru waan taatef hidhamtee erga turtee booda fannifamtee du’uu qabda” jechuun itti murteessan. Turtii yeroo gabaaban booda ”ati nama raajii dubbatu fakkaatta, jecha ati kana dura jette barreeffama irratti ilaallerra, mee dhuguma dubbataa raajii yoo taate sa’attiin kun jabbii bifa akkamii fi saala akkamii qabu dhalti!” Jedhanii sa’a rimaa tokko dhiheessanii gaafatan, Fitawurariinis akkuma sanaan ”sa’attiin kan dhaltu jabbii jibicha bifa adii qabu”jechuun yemmuu deebisan gidduudhaa Xaaliyaaniin tokko aaree saanjaa/shukkaa qabateen mi’a garaa sa’attii yeroo tarsaasu, akkuma jedhame jibichi adiin garaa sa’aa keessaa argame.
Kana booda Xaaliyaaniin waggaa shan booda Itoophiyaa gadi lakkisanii akka bahan itti dabaluun himan. Dhumarrattis ”ati nuufuu yaaddodha”jedhanii fannifamanii akka ajjeefaman itti murtaa’ee, Sanbata duraa Bitootessa 25/1929 Hoolota Gannat keessatti bakka ummanni baay’een walitti qabamanitti yemmuu fannifaman yeroo tokkoo fi lama funyoon (wadaroon) ittiin fannifaman citee yemmuu warri fannisan rakkatanii irra dedeebi’anii fannisuuf yaalanii dadhaban aaridhaan funyicha harkaa butuudhan gorora isaanii itti tuttufuun harkuma isaan ittiin funyicha morma isaanii keessa galchuudhan lubbuu isaanii akka darbitu godhanii jiru. Guyyaa lamaaf dirree irratti fannifamuun erga turaniin booda Bitootessa 27/1929 iddoo itti fannifaman irraa bu’anii awwaalaman.
Itti fufaniis warra waliin hidhaman keessaa gaafa Kibxataa Kolooboo gadaa rasaasaan ajjeefaman. Guyyaa Kamisaa Balamuu Charinat fi Jimaata qanyazmach Bultoo Daalachaa fi Bashaa Shuumee Gonjobaa rasaasan ajjeefaman. Sanbata duraa reeffi Fitawurarii Jiidhaa iddoo itti fannifame irraa bu’e yeroo sanaatti Xaaliyaaniin biyyattii guutuu weerartee waan turteef goota dubartii kan turan Obboleettiin Jiidhaa Aadde Jifaaree Tufaa aariif dheekkamsan ka’anii ”obboleessi koo Fitawurarii Jiidhaan ni du’e, obboleessi koo hangafaas Mul’ataa Tufaas ni du’e, akkasumas Hirkoo Mul’ataas du’eera, keessumattuu immoo Jaanoyi ari’atamee deemeera jedhanii Finfinnee irraa gara biyya dhaloota isaanii deemudhaan firoottan koo akka na gargaaran godhee firoottan koo kan ajjeese fi diina biyya koo weerare kana waraanee miidhama koo bahuutu narra jira” jechuun ijoollee isaanii Fitawurarii W/mikaa’el Goodhaa, Kooloneel Olaanaa Jiidhaa, Ajajaa Dhibbaa Sanbataa Tirtiree, Qanyaazmach Tulluu Qananii, Qanyaazmach Walda Aragaany Achaamyellaw, Qanyaazmach Maammoo Ejeree, Obbo Bulii Roobii fi gootota naannichaa walitti qabuun Xaaliyaanii waraanaa turanii biyya keenya keessaa akka bahan gumaacha guddaa godhanii jiru.
Jarreen ijoollee Fitawurarii Jiidhaa turan Ayyaantuu Garasuu Jiidhaa maal hojjetan? Gidduutti miidhaa maalitu irra gahe? Waan jedhu irraa waanuma xinnoo ishee haa ibsinu malee seenan isaanii kaafamee hin dhumu. Bara mootii moototaa jalqabaa hanga bara 1966 mootummaa Dargiitti Ayyaantuu Garasuu Jiidhaa naannoo adda addaa naanna’uun ummaticha tajaajilaa turanii jiru. Osuma tajaajila kanaan jiranuu mootummaan Dargii biyyattii erga dhuunfatee booda ”Ayyaantuwwan adda addaa fi hordoftoota amantichaa ijuma kootin hin arguu” jechuudhan amantichi akka badu qabeenyanis akka barbadaa’u meeshaaleewwan caccabsuun hordoftoota amantichaa hidhuun rakkina hedduu uumaa kan ture yommuu ta’u Ayyaantota dhiibbaan kun irra gahaa ture keessaa inni tokko Ayyaantuu Garasuu Jiidhaati.
Bara 1967 guddinaan waldaadhan duulli yeroo taasifamee turetti Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobiitti iddoo maqaa addaa isa Duulasaa Qorichaa(Shiroo) Ganda jedhamu keessa manaa fi qabeenya qabaachaa turan. Duula farra aadaa gaggeessun akka diigamuu fi akka saammamu dhiibbaa heddu irratti taasiseera.
Baruma kana duultota gamtaa guddinaa(እድገት በህብረት ዘመቻ) ummata naannichaa kakaasudhaan qindeessanii, Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejeree maqaa yeroo sanaan(Addis Alam) keessatti naannoo addaa bakka Qobboo jedhamutti manaa fi qabeenya isaanii saamudhaan balaa hamaa irraan gahanii turan. Akkasumas aanaa Meettaa Roobii iddoo addaa Qoree fi Ginnoo jedhamutti jiraattota naannichaa akka qindeessan gochuun manaa fi qabeenya isaanii mancaasanii mi’oota ciccimoo bakka birootti miliqsuun kan dura fudhatan yemmuu ta’u waggaa sadiin booda deebi’anii dhufanii qabeenya iddoo kanaa irratti hafee ture balleessaniiru.
Bara 1976 Aanaa Meettaa Roobii ganda Dullachaa Qorichaa ykn Shirootti qabeenya argamu eegdonni biyyattii fi bulchaa Aanichaa waliin ta’uun qabeenya isaanii saamun maatii isaanii irratti gidiraa gita hin qabnee fi reebicha heddu akka irratti raawwate namoonni lubbuun jiranii fi Ayyaantuu Garasuu Jiidhaa ni dubbatu.Ta’us miidhaa fi gidiraan kan irra gahe Ayyaantuu Garasuu Jiidhaa matuma isaanii fi maatii isaanii jajjabeessun erga turanii booda dhiiga ijoollee qabsaa’ota ummataatiin wareeggama guddaa guddaa kaffalanii jiru. Akkanumaan itti fufanii osoo jiranii bara 1983 yeroo Wayyaaneen sirna Dargii kuffisee aangoo yaabu hanga tokko Ayyaantotaaf fooyyen dhufe.
Sirna kana keessa hangi maluuf kennamuufii baatus cunqursaan bara Dargii labsiidhan Ayyaantotaa fi Duudhaa Oromoo fi Oromummaarratti labsame daangeffamee ture. Haaluma kanaan manaa fi qabeenyi diraan Ayyaantuu kanarraa fudhatamee ture deebi’eefii miidhaa fi gidiraa darbe gara boodatti dhiisuun fuula isaanii gara tajaajila hawaasaa fi misoomaa naannoo isaanii irratti naannessuudhan ummata isaanii wajjin hojii boonsaa fi raajiiwwan baay’ee hojjachaa turanii jiru. Ayyaantuu Garasuu Jiidhaa biyya isaanii fi ummata isaaniif maal hojjetan? gaaffin jedhu ka’uu waan maluuf hanga xiqqoo ishee isiniif qooduf; daandin baasii isaanin waggaa afur dura hojjatame manca’uu isaatin yeroo lammeessof qarshii 300,000.00(kuma dhibba sadi) baasii gochuidhan bonas ta’ee gannaaf tajaajila akka kennuuf cirracha uwwisundhan hojjisiisanii ummataaf dabarsanii kennanii jiru.
Daandin yeroo lammeessof suphamee ture ammas marroo sadeessof bara 1999 sababa misooma Habaabootiif daandichi kallattii birootin waan jijjiirrameef suphamuu kan barbaachisu suphamee, riqichi iddoo barbaachisutti riqicha hojjisiisanii walumaa galatti qarshii 1,290,00.00(kitila tokko, kuma dhibba lamaa fi kuma sagaltama) baasii taasisuun hojjisiisanii ummataaf gumaachan. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Walmaraa, Hoolota naannoo Afurtamii Afur(አርባ አረት) jedhamu irraa hanga Ganda Maslakaa Dammituutti daandii jiru isaantu hojjisiise. Daandii kana sababa hojjisiisaniif kan dhukkubsate ariitin mana yaalaa gahee akka yaalamuu fi deessun ciniinsun qabe buufata fayyaa salphumatti akka geeffamtuuf haala aanjessaniiru. Ayyaantuun kun, rakkinoota olitti ibsame kanniin hawaasa isaanii irra deddeebiin waan ilaalaa turaniif kutannoo guddaadhan qarshii 150,00.00(kuma dhibba tokkoo fi kuma shantama) ramaduun ‘Injinara’ qacaruun hojii daandii adda addaatif meeshaalee barbaachisaa ta’anii fi konkolaatawwan kireeffachuudhan daandii qulqullina qabu dheerina kiiloo meetira kudha sadi(13km) dheeratu hojjisiisaniiru.
Hojii boonsaa kanaaf ragaan ummataa naannichaa fi bulchiinsa aanaa dabalatee waajjiraalen adda addaa waraqaa ragaa fi beekkamtii garaa garaa kennaniifii jiru. Godina Shawaa Lixaa Magaalaa Shinootii hanga Ganda Duulaa Qorichaatti daandii jiru tabbaa fi irraan gadee namnis ta’ee horiin kufee ka’uu hin dandeenye baay’eetu waan tureef ogeessotaan qorachiisanii hojiiwwan daandiwwan adda addaatif meshaalee fi konkolaataa barbaachisaa ta’an kireeffachuun qarshii 150,000.00(kuma dhibba tokkoo fi kuma shantama) ol baasii gochuun hojjisiisanii ummanni naannichaa akka itti fayyadaman taasisaniiru. Daandin kun hojjatamee waggaa afur booda manca’uu isaatiin ummanni naannichaa akka hin rakkanne yaadudhaan hanga qarshii 100,000.00(kuma dhibba tokko) ol baasii taasisuun suphisiisaniiru. ‘Baazaarii’ hojii daandii Qaxqaxoo irratti argamuudhan misoomichaaf baasii gargaarsaa akka arjooman gaafatamanii qarshii 50,000.00(kuma shantama) eeyyama mataa isaaniitiin arjoomanii jiru. Karaa birootin immoo bu’ura gaaffii ummata irraa dhihaaten ummanni Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobiitii hanga Ganda Qote Bulaa Duulaa Qorichaatti argaman yoo mana Amantaa deemuu barbaadan kan argachaa turan deemsa sa’aatii 6:00 erga deemanii booda ture. Rakkoon kun waan isaanif ifee fi dhihoottis kan beekan waan ta’eef ummata naannichaa waliin haasa’uun iddoo mana amantaa ijaarsaf oolu erga fudhatanii booda waajjira mana Lallabaa biyyattii waliin mari’achuun Taabonni akka kennamuuf erga haayyamameefii booda Bataskaana Maariyaam jedhamu baasii mataa isaanin hojjisiisanii jiru. Ergasii itti gaafatamummaa mataa isaanitiin Taabonni kennameefii Luboonni, Daaqonootni fi Ummanni naannichaa bakka argamanitti Taabonni mana Qulqulluu akka galu taasifamee, Bataskaanattiin eebbifamtee tajaajila eegaltee jirti.
Duuka buutonni Ayyaantuwwanii ykn Waaqeffatoota kan ta’an Ayyaana kabajamuu qabu yeroo kabajanitti Qobbootti, Kumeetti, Shirootti fi Walmaratti galmoota haala ammayyaatin hojjachiisudhaan ummatichi sirna kadhannaa fi galateeffannaa isaanii akka itti raawwatan baasii olaanaa baasudhaan hojjachiisuu isaanii biyya keenyaf giddu gala turizimii addunyaatti galmaa’ee akka jiru seenaan isaaniis barreeffamee dhaloota dhalootatyi darbuudhan galtee qorannoo fi qo’annoo adda addaa ta’ee hayyoota seenaa fi duudhaa qoratan akka fayyaduuf yaalii guddaa gochaa turanii jiru. Maarree nutis duuka buutonni sirna kanaa hundi ifaajee Abbaa keenya Ayyaantuu Garasuu Jiidhaa eegalanii osoo galmaan hin geenye irraa boqotan kana bakka isaanii buunee hawwii isaanii milkeessuu qabna jenna.
Hojii isaanii kana itti fufsiisuun fuula duratti biyyaaf, lammiif, dhaloota dhufuuf yaaduu waan ta’eef hojii isaanii kana akka galmaan geenyu eebbi isaanii nu haa gargaaru. Hojii abbaan keenya hawaasa isaatif gumaachan kanaan qaama mootummaa adda addaa irraa badhaasni ergasiiyis deeggarsi isaan tajaajialaa hawaasa kanaaf qaban itti fufuudhan meeshaalee mana amantaa keessatti barbaachisu hunda guutuudhaan mindaa lubootaaf kanfalamu waggaa lamaaf osoo wal irraa hin kutin kanfaluudhan ummaticha Bataskaanichi akka tajaajilamu taasisanii jiru. Iddoo adda addaa isaan jiraataa turanitti ummatichatti beelaa fi rakkinni yoo dhufu midhaan iddoo adsa addaa irraa bitanii fiduudhan gargaarsa yeroo yerootti kennuu fi dabalataanis horii kan hin qabneef horii kennuudhan ummata biyyichaa rakkoo keessa akka bahu gumaacha olaanaa godhaa turan. Waraqaan ragaa dhaabbilee garaagaraan kenname kitaabicha irratti maxxanfameera.
Maddi: Kitaaba Shaashoo Nigusee 2021 maxxanfame.
© 2022	GADA NEWS SERVICE